Inhoroondo yeFXCC yemashoko ekutaura inoratidza zvinhu zvose zvakatengeswa munyaya yebhizimisi kwenguva yakati. Semuyenzaniso; mabasa ose (anoronga) mutengi anotora / anopinda mumusika, mari yehurumende imwe neimwe, chikero chebhuku pane imwe nguva uye kuenzanisa kwekutevera mushure mekuita kwega kwega ega kuverengwa.
Kukosha kwezvino kwekambani yekambani, izvi zvinosanganisira kuenzana kwehuwandu (iyo mari yemari yakachengetwa / yakasara mubhuku) uye chero shanduko inokonzerwa ne: zvikwereti uye kurasikirwa kubva kune zvipo zviripo uye zvakavharwa, zvikwereti uye zvikwereti kubva kune rimwe rollovers, pamwe chete nemhosva kubva mumabasa akaita se: makomisheni, mari yekuendesa, kana mari inobatanidza nebhangi, kana mari yakadaro isingashandisi.
Shanduro yekutengeserana inogamuchirwa nemabhanki makuru. Mari yehurumende ndeye "pegged" (yakasimbiswa) kune mari huru (yakasimba mari, yakadai sedhora reAmerica kana Euro). Muenzaniso wekupedzisira uri gumbo reSwitzerland franc kusvika ku euro. Iyo mbambo inogona kugadziriswa, kazhinji sekunatsiridzirwa kunzvimbo yekukwikwidzana kwenyika mumusika wokutengesa.
ADX; average average directional index
The Average Directional Movement Index (ADX) yakagadzirirwa sechiratidzo chekutengesa kuti iise simba rekuita nekuyera kutengesa mutengo mune imwe nzira. IA ADX chikamu cheMutungamiri weMovement system yakagadzirwa uye yakabudiswa naJ. Welles Wilder uye inowanikwa kubva kune Directional Movement indicators.
Izvi zvinoratidzira neChikoro cheVatengi veFXCC. Vose vatengi vanofanira kuverenga vozobvuma mabhizinesi ekusayina (magetsi kana zvichidiwa) FXCC Customer Agreement, vasati vavhura kambani neFXCC.
Izvi ndizvo zvinoshandiswa kugonesa purogiramu yepurogiramu yekutaurirana nemamwe mapurogiramu epurogiramu. Nekutsvaga kwekutengeserana kwepamberi, API inotaura nezvehutauri, zvichiita kuti platform ive nechokubatana neyo Forex market. APIs ine zviitiko zvekufambisa zvinobvumira kugoverana kwemashoko, zvakadai se: nguva chaiyo forex zvinyorwa zvitsva uye zvekutengeserana maitiro / kutonga.
Iko mari yekuti mari inowedzera, kana kusimbisa, mukupindurwa nekubudirira mune zvemupfumi uye nekudaro kushandiswa kwemusika.
Izwi rinoshandiswa apo vatengesi vepamberi panguva imwe chete vanotengesa uye vanotenga zvimwechete (kana zvakaenzana) zvigadzirwa zvemari pamwe nechinangwa chekubatsira kubva pamutengo kana / uye kushamba kwemari.
Mutengo unoshandiswa nemari, kana chiridzwa chinotengeswa neFXCC, kana chimwe chikamu chekambani. Iko kubvunzwa kana kupa mutengo inonyatsoenderana nemutengo muchengeti achanyorwa apo iye / ari kuedza kutenga kana kutora nzvimbo.
Chero chakanaka chinenge chichikosha chekushandurudza.
ATR; chiyero chechokwadi
The Average Value Range (ATR) chirongwa chinoderedza hukuru hwenguva iri pasi pekucherechedza, achitarisa chero gaka kubva pakapera nguva yekutengeserana yapfuura.
Yakagamuchirwa mutengesi uye nyika inozivikanwa chiratidzo / nguva, yeAUD / USD currency pair.
Uyu ndewechitatu wekambani anopa mvumo yekutengesa simba, kana kuti anopa kutonga pamusoro pekambani yekambani ku. FXCC haiti, nekutaura kana kuti zvimwe, inotsigira kana kubvumira nzira dzekushandisa dzomumiririri ane kodzero. Saka FXCC haigamuchiri mutoro wemafambisi ane kodzero.
Iyi ndiyo nzira yekutengeserana iyo mirairo inogadziriswa nehurongwa nehurongwa, kana chirongwa, chinowanzotumidzwa sechishandise vadzidzisi vadzidzisi kana maEA, kusiyana nemunhu anenge achida kugadzirisa manyorerwo aanoita maitiro / mairairo mumusika kuburikidza nepuratifomu. Iko kutenga kana kutengesa mirairo inowanikwa mumusika nehurongwa hunofanira kuurawa apo zviyero zvakagadzirwa nehurongwa hwevatengesi, pakupedzisira zvinosangana.
Avhareji yebhadharo yeawa rimwe chete
Inomiririra muvhareji wekuti vashandi vanobhadharwa neawa yegore rakapiwa.
Dhipatimendi reFXCC reRefisi rinosangana nekugadzirisa nyaya, mari inoshandiswa muakaunti yekambani, nyaya dzekuyananisa, zvekugadziriswa nevatengi uye mamwe mabasa akawanda maererano nebasa iro risingabatanidzi zvakananga kutenga, kana kutengesa imwe mari yemari.
Iyo ndiyo nzira iyo nzira yekutengesa inoshandiswa kuburikidza nenyaya yezvakaitika kuitira kuti ivimbise kuti yekutengesa hurongwa inobatsira, kuitira kuti usadzivise ngozi dzekutengeserana dzemutengo wevatengesi.
Icho chirevo chinopfupikisa musiyano muhuwandu huwandu pakati pekubhadhara mukati uye kunze kwenyika kwenguva yakatarwa. Iyo inozivikanwawo seyeri yezvekubhadharwa kwenyika yose sezvo inosanganisira kutengeserana pakati pevagari vemunharaunda uye vasingasviki.
Kuenzanisa Kwekutengeserana, kana yeEalth Balance
Ndiyo musiyano pakati pezvinotengeswa munyika uye zvayo zvekutengesa kweimwe nguva. Icho chikamu chikamu chakakosha chekambani yenyika ino. Munyaya iyo nyika inotengeserana ichikosha kupfuura inotengeswa, iyo nyika inobhadhara mari, uyewo, kana nyika iri mune nguva yakawanda yekutengeserana kwemamiriro ezvinhu (trade gap), mari inopesana nevanoshambadzirana navo ichaderera, kana kuti kuderedza, zvichiita kuti mari yekutengeswa inodhura inodhura uye kutengeserana kunodhura kune vanotengeserana.
Bhizinesi reNyika Dzogara (BIS)
Inyika yezvemari yenyika inosimudzira kushandiswa kwebhangi hukuru nechinangwa chekusimudzira kugadzikana uye kugoverana kwemashoko pakati pemabhangi makuru enyika. Chimwe chinangwa ndechekuva chinhu chikuru chekutsvakurudza kwezvemari.
Zvichitsanangurwa semutsara wechikwereti chinopiwa nebhangi kumuteereri, izvi zvinowanzozonzi "mutsara".
Banking Day (kana Bhizinesi zuva)
Bhengi zuva ndiro zuva rebhizimisi rebhangi. Inosanganisira mazuva ose apo mahofisi ebhangi anosvirwa kuitira bhizinesi kuvanhu, apo bhizinesi rinosanganisira mabasa ose ebhengi. Kazhinji zuva rebhangi mazuva ose kunze kweMugovera, Svondo uye mazororo anotsanangurwa zviri pamutemo.
Bhenji guru reJapan.
Inogona kushandiswa seiri yakaenzana nemari uye iri pepa rinobudiswa nebhandi guru sechimiro chekubatanidza chikwata (chivimbiso chinyorwa), icho chinobhadhara kune mutakuri paanoda.
Iyo inharaunda inofarira inobva pane iyo bhandi yepamusoro inokwereta mari kumabhenji ayo epamba.
Izvi zvinotumidzwa semari yekutanga mune imwe mari mari. Mari yepasi inowanikwawo mari inoshandiswa nemurima (anopa), inochengetedza bhuku rayo maakaiti. Mune misika yeFX, US Dollar inowanzoonekwa seyo mari yepasi yehuwandu hweFX quotes; zvinyorwa zvinoratidzirwa seyuniti ye $ 1 USD, zvichienderana nedzimwe mari inotsanangurwa mukati mavo. Izvo kunze kwegungano iri: British Pound, Euro uye Australian Dollar.
Nharaunda yepasi ndiyo chikwereti chekuda kuti bhandi guru, rakafanana neBhange reEngland kana Federal Reserve, richabhadhara kubhadhara mari kumabhangi ekutengeserana. Nengozi inokweretesa vanokwereta ichabhadhara mari shoma pamusoro pehuwandu hwechikwata, unhu hwakaderera hunokwereta huchabhadhara huwandu huri nani, pamusoro pehuwandu hwebhadharo.
Rimwe chete kubva muzana rimwe chete. Semuyenzaniso; musiyano pakati pe3.75% uye 3.76%.
Mutengo unotsanangurwa muhuwandu hwegore hwekudzoka kana maererano nehutano hwekubereka huri panzvimbo yemutengo maererano nemari.
Kutenga pamusika inzvimbo yemusika umo pane nguva yakaramba ye ((kazhinji) kuwira kwekutengeswa kweimwe chibereko chemari yekutsvaga.
Kushandurwa mumamiriro emusika apo vatengesi uye / kana vatengesi, avo vashoma pane zvigadzirwa zvekutsvaga, vanofanira kutengesa kushandiswa pamutengo wakakwirira kudarika ivo vakatengesa nokuda kwayo, kunze kwekuti kukwira kwemusika mamiriro / s kuchaita kuti kurashikirwa nhoroondo, kana pabasa ravo / s. Bhabhi rinodzima rinogona kuva chiitiko chenyika dzakawanda chakagadzirwa mumisika yekutsvaga, kazhinji nemabhanki makuru kana vatengesi.
Mumwe mutengesi anotenda kuti mutengo wemugoti wekutsvaga uchawa.
Bhuku Rinokosha ndiro zita rinowanzoshandiswa kweRipoti yeHurumende, yakabudiswa musati wapera musangano weFOMC pane zvikwereti. Inowanikwa kuvanhu vasere (8) nguva pagore.
Mutengo uyo FXCC (kana imwewo chikamu chekambani) inopa kutenga iyo mari mari kubva kune mutengi. Ndiyo mutengo uyo mutengi acharondedzerwa paanoda kutengesa (kupfupika) nzvimbo.
Bhidhiro / Bvunza Kuparadzira
Misiyano pakati pebhadhiro uye kubvunza mutengo.
Inotsanangura zvakajairika kumabhii maviri kana matatu okutanga emutengo wemari. Semuyenzaniso; EUR / USD mutengo wekushandura we .9630 inoreva '0' sechikwata chekutanga. Nokudaro mutengo waizova 0.9630, ne "mufananidzo mukuru" uri 0.96.
Chiratidzo chekambani chinotarisa kusagadzikana, chakagadzirwa naJohn Bollinger. Vanopa tsananguro yechirevo yepamusoro uye yakadzika, patinogona kutarisa matengo sepamusoro pamakwikwi epamusoro uye sepamusoro kune boka rezasi.
Kuputsa, kana Kubuda kunze
Kuputika izwi rinoshandiswa kurondedzera kukurumidza kushamisika, kana kukurumidza) mumutengo wechiridzwa chinotungamirira kumapfupa kuburikidza nehutano hwakatarwa hwekutsigirwa kana kushorwa.
Bretton Woods Agreement ye 1944
Ichi ndicho chinyorwa 'Chibvumirano cheWWII chakaita kuti pave nekutsinhanisa mari yekutengesa uye kuisa mutengo wegoridhe. Chibvumirano chakaitwa pakati pevatumwa vanobva kune dzakasiyana-siyana dzakasiyana-siyana-nyika dzinomiririra hupfumi hwepasi rose.
Mushandi, akadai seFXCC, uyo anorayira mitemo yekutenga uye kutengesa michina yemari, yakadai se: mari uye zvimwe zvibatanidza, kana kwekutumirwa, kana purofiti pakupararira.
Kuvaka (Imba) Zvibvumirano
Nhamba yezvivako zvitsva zvekuvaka zvakapiwa nehurumende kana imwe sangano rinotungamirira mushure mekugadzirwa kwekodzero kunogona kutanga.
Nguva yakareba yekumhanya kwemitengo yeimwe chibereko chekutsvaga kwekutsvaga.
Mumwe mutengesi anotenda kuti matengo emamwe michina yekutsvaga achasimudza.
Zuva ripi apo mabhengi ezvokutengeserana akazarurirwa bhizinesi, kunze kweMugovera kana Svondo, mune guru rekubhadhara mari yemunyika.
Murairo unosanganisira mirayiridzo yakananga yekuita mutengesi kutenga zvigadzirwa pamutengo wakatarwa kana wezasi. Haisi kushandiswa kusvikira mutengo wemusika uri pa (kana kuti wakaderera) mutengo wemuganhu. Mutengo wekutsvaga wakatenga kamwe wakatanga, unova murairo wekutengeserana kutenga pamutengo wekutengesa wezvino.
Iko kugadziriswa ibasa rekuisa rinowanikwa pamusoro pezvino inoshandiswa kumubvunza mutengo, haisi kushandiswa kusvika pamusika kubvunza mutengo uri pa (kana kuti pamusoro) yemutengo wekumira. Iko kugadziriswa kwekutenga kamwe kwakakonzerwa, inova mutemo wemusika wokutenga pamutengo wematengesi iye zvino.
Iri ndiro izwi rinoshandiswa mumusika wevatengi vemari kune imwe nyika yeZ $ / GBP mutengo.
Mhando yechati chinoumba mabheji akafanana nekuonekwa kwezvigadziko zvemwenje. Iyo inoratidza mutengo wepamusoro uye wepasi, pamwe chete nematengo ekuzarura nekuvhara.
Mari iyo inonzi yakarongerwa kana kukanganisirwa kubva kubhuku rekubata mari yepamusoro apo inowanikwa pasi peusiku huwandu hwezvikamu zvezvikamu zvakasiyana.
Mukutengeserana kwe Forex, kutengesa kutengesa inzira inoshandiswa nemushambadzi anokweretesa mari pamutengo wekuderera wepasi, kuitira kuti atsire mune imwe nzvimbo iyo inogona kupa kupa yakakwirira. Iyi sarudzo inowanikwa zvikuru mumusika wekunze kwekunze, apo central bank 'kukwereta mitengo yakasiyana.
Iri ndiro zuva rimwechete rekugadzirisa kwezvisungo.
Kutaura nezvekutengeserana kwekutengesa kunogadziriswa pazuva iro mutengesi unobvumirana.
Mari inosungirirwa inowirirana nehuwandu hwemari inowanikwa munhoroondo yacho, ichifunga nezvekuwedzera kana kudarika kwezvinhu zvakavharwa, nzvimbo uye kurasikirwa, pamwe chete nedzimwe chikwereti, kana zvikwereti, zvakadai se rollovers, uye mutemo (kana pane inoshanda).
Iyo Commodity Channel Index (CCI) inofananidzwa nemutengo unorevei iye zvino pamusika nemuwandu wemutengo unorehwa unowanikwa pamusoro pemawindo chaiwo emazuva e20.
Bhizinesi, iro rinotarisirwa kutonga hurongwa hwemari kana yezvikamu zvenyika. Iyo Federal Reserve ndiyo bhandi guru reUnited States, European Europe Bank ibheji guru reEurope, Bhanhire reEngland ibhandi guru reEngland uye Bhenji reJapan ndiro gamba guru reJapan.
Chiito icho bhandi guru, kana mabhandi makuru ari kupinda panzvimbo yemisika yemari yokutengeserana mukuedza kuchinja kusagadzikana kwekugoverwa uye kudiwa, nokutenga zvakananga (kana kutengesa) shandu yekunze.
The Commodity Futures Trading Commission, iyi ndiyo US Federal regulatory agency yemangwana inoshandiswa pamisika yemitengo, kusanganisira mari mune ramangwana.
Iro izwi rinoshandiswa apo mutengo wakanga uine pakati pemigwagwa miviri yakafanana (kutsigira uye kumira mazinga) kwenguva yakati chaiyo.
Izvi zvinofungidzirwa somunhu anoongorora ruzivo rwemifananidzo uye zvinyorwa zvemashoko ezvakaitika kare, kuitira kuedza kutsvaga maitiro, kana maitiro ekutengeswa kwemutengo, izvo zvichabatsira kufanotaura kutungamirirwa uye kusada kweimwe chibereko chekutsvaga. Iro rudzi rwehutano rwehutano hwekwenyanzvi yekuongorora.
CHF ndicho chirevo cheSwitzerland franc, mari yeSwitzerland neLiechtenstein. I Swiss franc inonzi "Swissie" nevatengesi vemari.
Mari dzinowanikwa pachena, zvichibva pakugadziriswa kwebhizimisi, kana maitiro.
Mutengi kana Mutengi
Mutevedzeri weAkaunti yeFXCC. Mutengi, kana mubhengi wekambani anogona kuva: munhu oga, mari maneja, sangano rekambani, trust account, kana imwe nhengo yepamutemo inofarira mukukosha nekushanda kwekambani.
Chivharo chakasimbiswa chinoreva nzvimbo iyo isisipo sezvo mutengesi akabuda mumusika pasi pekufunga kwake. Semuenzaniso, mutengesi wekutengesa uchange uine huwandu hwekutsvaga nekutenga nzvimbo uye pamwe chete.
Mari iyo iyo mutengesi akadai seFXCC inogona kutengesa pabasa rose.
Kune zvitatu zvepamberi pezveruzhinji zvinosanganisira mari kubva kunyika dzine zvinhu zvakawanda zvezvinhu zvakasikwa / zvigadzirwa zvemvura. Zvinhu zviviri zvezvinhu izvi ndezvi: USD / CAD, USD / AUD, USD / NZD. Mutengo wekutengeserana unoenderana zvikuru nekuchinja kwezvinhu zvekutengeserana. Vatengesi vachitsvaga kuti vawane ruzivo rwekutengeserana kwemari 'shanduko, kazhinji vanotarisa kutengesa aya maviri maviri.
Imwe magetsi, kana kuti yakadhindwa yakashandurwa nevamwe vanotsanangura zvose zvakakosha zvese zvekubhadhara mari.
Kubatanidza izwi rinoshandiswa kurondedzera nguva iyo mitengo isingasviki uye inofamba mberi.
Chiyero chehuwandu hwehutariro hwehutariro hunopoteredza mamiriro ezvinhu emari mukati mehupfumi uye mutengi wehupfumi hwemunhu.
Izvi zvinotsanangurwa sechiyero chepamwedzi chekushandura muhutengo hwemutengo webhasiki yezvinhu zvekutengesa, kazhinji kusanganisira: zvokudya, zvipfeko, uye kutakura. Nyika dzakasiyana-siyana mukutsvaga kwezvikwereti uye mari yekugadzirisa mari.
Kuenderera mberi ndiwo mazwi anowanzoshandiswa apo zvinotarisirwa kuti mamiriro acho achawedzera.
Sangano re OTC (Over the Counter) rakaitwa neFXCC kutenga kana kutengesa mari yakatarwa yemari yakasarudzwa, nokuda kwemuwandu wakatarwa weimwe mari, iyo kugadzirisa kunotarirwa pane imwe nguva yakatarwa (iyo inowanikwa zuva racho). Nhamba yechitsinhanisi yekunze kune iyo mapato maviri anotengesa kuzogadzirisa zvikwereti.
Mutengo unoshandiswa kuchinja mari yakasiyana yepadhesi ye "non-US US" madhora / kurasikirwa mumadhora, pakupera kwezuva rimwe rekutengesa.
Mari inogona kushandiswa zvakasununguka kune mamwe mari kunze kwekudzivirira mitemo. Zvinowanzobatanidzwa nehupfumi hwakasununguka uye hwakagadzikana, uye zvigaro zvavo zvinowanzogadziriswa kuburikidza nekutengeswa uye kudiwa mumusika wokutengesa kune dzimwe nyika.
Icho chisimba chinopesana uye mazwi anoshandiswa kurondedzera chiito chekutengeswa panguva yekuchinja kwechikamu chechiitiko.
Mutariri webhengi wekunze, uyo anopa rubatsiro kune imwe nzvimbo yezvemari, iyo isina davi munharaunda yezvemari yakakodzera, somuenzaniso; kutungamira kuendeswa kwemari kana kutungamira mabhizinesi.
Mari yechipiri in a currency pair. Semuyenzaniso; in the currency pair EUR / USD, the counter currency is USD.
Mumwe munhu kana bhangi inobatanidzwa mukudhindana kwemari kwenyika yose uye ndiye munyori wechirongwa chekontra yakaita sechikwereti.
Inoreva kuvepo kwenyika kugadzirisa kana kuchinja kukosha kwerudzi. Mutengo wekutsvaga mutengo wekutengesa unofanira kunge uri pamusoro pekushandiswa kwekutengesa kwezvinodiwa kunosanganisira kuongorora kwezvematongerwe enyika, zvematongerwe enyika uye nzvimbo dzeimwe nyika, kuitira kuti uone kugadzikana kwayo kwose.
Kuita mutengesi unozovhara nzvimbo.
Izvi zvinodanwawo se "peg inogadziriswa". Izvi zvinorondedzerwa sehuwandu hwekushandura kwenyika huripo, pane humwe mari.
Chibvumirano chepamusoro chekutenga, kana kutengesa mari imwe yekunze, mukutsinhanisa imwe yemari yekunze. Iko mari yakachinjana haisi US Dollar.
A mari isingasanganisi USD.
Shanduro yekutengesa pakati pemari mbiri, uye iyo isiri iyo mari yepamutemo yenyika uye zvose zviri kuratidzwa maererano nemari yechitatu.
Cryptocurrencies idijitari, mari chaiyo kushandisa cryptography nokuda kwekuchengetedzwa kwekutengesa. Sezvo zvisingaitwi nemabhanki makuru, kana hurumende inotumidzwa kuva yezvisikwa zvehupenyu, iyo inofanirwa inoita kuti irege kudzivirirwa nehurumende, kana kushandiswa, zvakadai seBitcoin.
Ndiyo midziyo yesimbi kana pepa, iyo inoshandiswa chaizvo kana kuparadzirwa, sechirevo chekutsinhanisa, kunyanya kupararira mabhanki nemari.
Inowanzoshandiswa kuderedza dambudziko rekushandiswa kwemari, uye inoshandiswa sekusarudzwa kwemari apo chikamu chakakosha chedengu chinoshandiswa kuyera kukosha kwekuzvipira kwemari.
Icho chirongwa chemagetsi chinoshandiswa kwekutendeuka kwemari; chivigirator chinoshandura kukosha kwemari imwe chete muchikosha cheimwe mari. Semuyenzaniso; madhora kusvika kuEuro. Vashanduri vanofanira kushandisa magwaro ekupedzisira emakethe anowanika mumusika wokutengesa kune dzimwe nyika.
Mari inosarudzwa inopa muchengeti chakanaka, asi kwete kuzvipira, kuchinjana mari yakatarwa yemari inoshandiswa mune imwe mari mune imwe imwe pamutengo wakatarwa pazuva rakatarwa.
Zvichitsanangurwa semari mbiri mune imwe shanduro yokutengeserana. I 'EUR / USD' muenzaniso weparadhesi maviri.
Ngozi yekuchinja kusina kunaka mukushandurwa kwemari.
Aya ndiwo mazita matatu ekutsvaga tsamba akaumbwa neIO (International Organisation for standardization) uye inowanzoshandiswa panzvimbo yemari yakazara mazita. Somuenzaniso: USD, JPY, GBP, EUR, uye CHF.
Inonyanya kutaurwa kune mari yehurumende ndiyo Eurozone. Icho chibvumirano pakati penyika mbiri kana kupfuura kugovana mari yakafanana (kana peg), kuitira kuti varambe vachigadzirisa mitsara yavo kuchengeta kukosha kwemari yavo pane imwe nzvimbo. Nhengo dzehurumende dzinobatanidzwawo mari imwe chete yekutengeserana kwemari uye yekunze kune imwe nyika.
Iyo FXCC yekuita sangano iyo vatengi vose vanofanira kukwanise uye kuendesa nekugamuchirwa neFXCC, musati mvumo inogona kuitika.
Daily Cut Off (pedyo nemusi webhizimisi)
Iyi ndiyo pfungwa imwe chete munguva, panguva imwe yebhizimisi, inomiririra kuguma kwezuva iroro bhizinesi. Zuva rebhizimisi reimwe sangano rakapinda mushure mekugurwa kwezuva nezuva, rinoonekwa sekuitwa pazuva rinotevera rebhizimisi.
Kutenga kana kutengesa kurongeka kuti kana ikasaitwa musi iwoyo chaiwo, inobva yaburitswa.
Inoreva kushandiswa kwave kwakazarurwa uye yakavharwa mukati mezuva rimwe chete.
Vatengesi nevatengesi vanotora nzvimbo muzvibereko zvekutsvaga, izvo zvinoshandiswa mushure mekuvhara kwezuva rimwe chete rebhizimisi, zvinotsanangurwa sevatengesi vezuva.
Vatengesi vangada kuchengeta zvinyorwa zvezvinhu zvose zvinotengeswa panguva imwechete. A personalized deal blotter ine zvose zvinyorwa zvinokosha zvakakosha kumatengesi. Mufambi wekutengesa anotengesa kugadzirisa zvinogona kusanganisira ruzivo rwakadai sekuvhura uye kuvhara mamiriro emari, yakatangwa nemutengesi.
Ndiyo musi iyo mutengesi unobvumirana.
Matengesero eExperx akazaruka 24 / 5, saka masangano akawanda ane maekski munzvimbo dzakasiyana-siyana. Kuita madhiketi kunowanikwawo kunze kwemashamba ekutanga; mumabhangi nemakambani emari, kuitira kuti vashandise mabhizimisi mune zvivimbiso zvakawanda. Kubata madheki kumakambani emakambani, kana kutengesa forex sevatengesi vezvitengesi, vanowanzogadzirisa zvinyorwa zvavo uye vanopararira pavanopa kutengeserana mberi kwevatengi vavo, zvisinei nekusvika pamusika zvakananga, asi, semuenzaniso, zvakananga kuburikidza nekugadzirisa nzira.
Iyi ndiyo nzira yekutanga yekunyora ruzivo rwemashoko runobatanidza chero upi zvake wekutengesa mari.
Munhu (kana kuti akasimba) anoita sevakuru, kwete seanoshanda, mukutengesa kwekutengeserana kwenyika (kutenga kana kutengesa). Vatengesi vanozvitengesa ivo pachavo, vanozvitengesa ivo pachavo / s uye vanotora pangozi yavo pachavo.
Izvi zvinotsanangurwa sekuputsa kwekambani yemari.
Kuenzanisa kusina kunaka kwebhizimisi.
DEMA, (double exponential moving average)
Yakagadzirwa naTech Mulloy, technician, Double Exponential Moving Average (DEMA) kuedza kugovera chiyero chakanaka kuburikidza nekuverenga nzira inoshandiswa pakugadzirisa, zvichida nechinguva chiduku kupfuura chiyero chekufambisa chimiro chekufamba. Iko kuverenga kunotonyanya kuoma kupfuura kuenzanisa kwekufamba.
Iko kuderera kwehuwandu hwemari yakaenzana nedzimwe mari, nekuda kwemashamba emabhizimisi.
Ichi ndicho chiyero chehukuru hwehuwandu uye inoratidza chiratidzo chekushandiswa kwekutengeserana kwe (semuenzaniso) imwe shandari mari, pane imwe nzvimbo panguva.
Nekuda mari yekutengesa iyi ndiyo inofanirwa kudiwa kuitira kuti apedzisire kune imwe shanduko yekutengeserana, semuenzaniso; zita, chidimbu, uye mazuva.
Kuenzanisa ndiko kuenzanisa kwekunyika kwenyika yebhadharo kune: imwe mari, boka remari, kana seyero. Kuyera kwepurogiramu yemitemo yemari inoshandiswa nenyika dzine shanduko yekushandura, kana sendi-fixed fixed exchange rate. Kuongororwa kunoshandiswa nehurumende uye bhanhire rinobudisa mari. Nyika inogona kukanganisa mari yayo kune, somuenzaniso, kurwisana kusagadzikana kwebhizimisi.
Uyu mufananidzo wakatarwa semutengo wemutero uye chero ipi zvayo yakagadzirirwa kushandiswa kwemari yekuzvipira.
Kuita divergence kunogona kunge kwakanaka kana kusina kunaka uye iyo chiratidzo chekuchinja kwechiitiko chekufamba kwemitengo.
Deutsche Mark. Iko mari yekare yeGermany isati yashandurwa ne euro.
DMI, mutungamiri weboka rinotungamirira
Inotungamirirwa neMotinho Zviratidzo (DMI) zvikamu zveMutungamiri weMutungamiri weChirongwa chekugadzirwa uye yakabudiswa naiye akatanga nheyo dzekutengesa dzakawanda, J. Welles Wilder. Izvo zvinoshandiswa pachirevo neAverage Directional Movement Index (ADX). Zviratidzo zviviri zvinorongwa, Positive DI (+ DI) uye Negative DI (-DI).
Chigadziko chemwenje chinoumba kana mutengo wakazaruka uye wepedyo wava kuda kuenzana. Iyo inomiririra mhando yakakura pakati pepamusoro uye yakaderera, asi iyo yakanyanyisa kusiyana pakati pemutengo wakazaruka uye wokuvhara uye inoratidzika semuchinjikwa kana musinjiro wakaputika.
Dhora iri inotsanangurwa sehuwandu hwekushandura kweimwe mari yakatarwa nedhora (USD). Yakawanda yekushandura mari inoshandisa dhora semari yepasi uye imwe mari semari yemari yemari.
Izvi zvinorondedzerwa semari yemari inoshandiswa pakuisa, kana kuti kudyidha mari munyika yakabva.
Izwi rinoshandiswa nevamiririri veFXCC kuitira kuti varatidze kuti kutaura kwemashoko kwave kuchiitwa uye ikozvino kunosungirirana.
Inoshandiswa mukugadzira shanduro sechati chati iyo inogona kuratidza kuti inogona kunge yakashambadza yekutengeswa kwemutengo wemadhora
Inoshandiswa mukugadzira shanduro sechati chati pattern yakagadzirisa iyo inogona kuratidzira hosha yekutengeswa kwemitengo inotevera.
Chiito chinoreva manzwiro kana kuti mutauro wemutauro unoshandiswa apo bhenji guru rinotarisa kukurudzira hupfumi uye hazvibviri kutora matanho ane utsinye maererano nehupfumi.
Zvinhu Zvisingagumi Kurongeka
Icho chiratidzo chezvemari chinoratidza zviratidzo zvitsva izvo zvakaiswa nevadziki vekuumba munguva iri pedo. Inotarisa simba rekugadzira uye inobatsira varairidzi kuti vaone mafambiro ekuwedzera kwehupfumi.
Zvichitsanangurwa sechiito chakatorwa nebhandi guru, nechinangwa chokuwedzera mari yekugovera, nechinangwa chokukurudzira basa rezvemari, zvikurukuru nekukurudzira kuwedzera kwekuwedzera kwezvinhu.
Iyi ikarendari inoshandiswa kuongorora zviratidzo zvezvemari, mametric, data uye mitsara inofanira kusunungurwa nenyika imwe neimwe, nzvimbo uye hupfumi hwekutsvaga hupfumi hwakasimba. Zvichienderana nekunaka kwavanoita pamisika, kubudiswa kwemashoko kunowanzochengeterwa maererano; avo vakataurirwa kuva nechinangwa chikuru vanowanzotsanangurwa se "kukurira kwakanyanya".
Nhamba inowanzobudiswa nehurumende yenyika, ichiratidza kuwedzera kwehupfumi hunoenderana nechiratidzo.
Kubudirira Exchange Rate
Icho chirondedzero chinotsanangura simba remari inofananidzwa nedengu reimwe mari. Inogonawo kuonekwa semuedzo wokupfupisa migumisiro yekutengeserana kwenyika yekushandiswa kwemari kwayo kune mamwe mari.
Electronic Fund kutumira.
The Exponential Moving Average (EMA) inomirira chiyero chematengo, kuisa huwandu hwemasvomhu kune imwe nguva yemazuva ano. Kuyerwa kunoshandiswa kumutengo wakangoshandiswa kunobva panguva yakasarudzwa yeruzhinji inoshandiswa nemushandisi. Iyo yakafupika nguva ye EMA, kuwedzera kuwedzerwa kunoshandiswa kumutengo wapfuura.
Chiratidzo chezvoupfumi cheU.S. chinotarisa kuwedzera kwekuwedzera uye kuwedzera kwemari yebasa.
Mugumo weZuva Rokutanga (EOD)
Izvi zvinotsanangurwa sehurongwa hwokutenga, kana kutengesa chigadzirwa chemari pamutengo wakatarwa, urongwa hunoramba hwakasvinudzwa kusvikira pakupera kwekutengesa.
Chero Nzira Yekuda
Zvichitsanangurwa semamiriro ezvinhu anowanikwa muEuro Interbank deposit market, apo zvose zvikwereti uye zvipo zvekupa imwe nguva, zvakanyatsofanana.
Kutengesa mari mari kuburikidza neInternet brokerage accounts. Electronic currency trading inowedzera kushandurwa kwemari yepasi kune mari yekunze, pane inowanikwa mumakero kushandiswa kwemari, kuburikidza neInternet brokerage accounts. Nokushandisa ruzivo rwekombiyuta, inounza vatengi nevatengesi pamwe chete uye kushandisa magetsi zvekugadzira iyo inogadzira nzvimbo dzepamisika dzepamisika.
Iyi ndiyo imwe yekushandiswa mari yeEuropean Union bloc.
Bhandi guru reEuropean Union.
Dengu reEU rinodiwa mari.
European Economic Monetary Union (EMU)
Sangano rekubatanidza pakati pevadzidzi veEuropean Union, Rinosanganisira kubatana kwezvematongerwe enyika nemari, uye mari yakafanana 'euro.
Inotsanangurwa sechitsinhanho chekutengeserana mari iyo inoshandisa mari ye euro, kana zvakananga, kana nenzira yeuro inoshandisa zvikwereti zviduku zvenguva pfupi.
Iyi ndiyo mitengo inofanirwa kubhadharwa yebhadharo yeEuro pane imwe nguva yenguva.
Eurocurrency ndiyo mari yakachengeterwa kunze kwemakethe yemusha yavo nehurumende yenyika kana makambani. Izvi zvinoshanda kune chero mari ipi neipi uye kumabhangi mune chero nyika. Somuenzaniso; South Korea yakakonzerwa mubhengi muSouth Africa, inozoonekwa se "eurocurrency". Iyo inozivikanwawo se "euromoney."
Eurodollars inotsanangurwa sekuti nguva inoshandiswa inodhindwa muAmerica emadhora, pamabhenji kunze kweUnited States, saka haisi pasi pemutongi we Federal Federal. Sezvakagadziriswa mari yakadaro inowanikwa pasi pemutemo wakawanda kudarika, semuenzaniso, mari iyo yakafanana mukati meU.SA
IEuropean Union (EU) iboka reZimbabwe 28 iro rinoshanda sehupfumi uye zvematongerwe enyika. Zvigumi nemapfumbamwe zvenyika zvino zviri kushandisa euro kuti ive mari yavo yepamutemo. IEuropean Single Market yakavakwa nenyika ye12 mu1993, kutevedzera kusununguka mana; kufamba kwe: zvinhu, mabasa, vanhu nemari.
Kupfuura Marginal Deposits
Mari yakachengetwa neFXCC iyo isingashandisi mumuganhu pamusoro pezvipo zviripo zvakasununguka.
Nekutsinhanisa kushandiswa kwemari, shanduro inowanzotsanangurwa senzvimbo inowanikwa apo zviridzwa zvinotengeswa uye zvinowanzogadziriswa. Mienzaniso: New York Stock Exchange, Chicago Chicago Trade.
Chirongwa chakaiswa munzvimbo nehurumende nemabhandi makuru kuitira chinangwa chekudzora miganhu uye mitsva yechitsinhanho chekune imwe nyika uye zvigadzirwa, kusanganisira: kubhadhara mari yakawanda, quotas, zvishandiso, mitero, levies uye zvikwereti.
Shanduro yekushandura inoshandiswa pfungwa yekugadzirisa shanduko yemari kushandiswa kwemari margins- yegadziriro yakagadzirirwa kutonga mari yekushandura mari maererano nedzimwe mari. Pane kuchinja kwekushandura mari mari mukati memiganhu yemaganhu. Iko mari yokushinja mari inowanzozivikanwa seyo semi semi pegged currency system.
Tsanangudzo yokutsinhanisa kune imwe nyika kune imwe mari shoma inoshandiswa uye yakashandurwa. Zvinhu zvisinganzwisisiki mari hazvibatsiri uye hazvidi kuwedzerwa kwemusika, semuenzaniso, euro uye naizvozvo inoshandiswa mune zvakawanda zvishoma. Kutengesa mari yekare inogona kuve yakadhura zvakanyanya sezvinotsanangurwa - bhizimusi / kukumbira kupararira, inogara yakazara. Exotics haitengesi nyore kutengesa (kana inowanika) mumatareji akaenzana ekubhadhara. Mienzaniso yezvokuda mari yakawanda inosanganisira bhadha ye Thai uye dinari yeIraqi.
Inoreva ngozi iyo inobatanidza nekupenya mumutengo wemusika unogona kutungamirira kune pfuma inogona kuwanikwa kana kurasikirwa.
Iyo mharidzo inogadzirwa neUnited States census Bureau iyo inopa tsanangudzo yehuwandu hwematongerwo emitemo isiri yakasimba uye inogara yakachengetedzwa uye zvigadziriswa kutengeswa, mirairo isati yazadziswa, uye zvinyorwa zvevashandi vekumba.
Kurongeka kwakakurumidza kwematengo, kana kutengesa mumusika kunokonzerwa nekusawirirana kwezvokugovera uye zvido zvekutsvaga kubva kune vatengi uye / kana vatengesi, vanozivikanwa nemamiriro ezvinhu apo mari dzezvemari dziri kutaridzika zvakanyanya kuwanda kwekusagadzikana, zvinosanganiswa nekutengeserana kusina kuwandisa. Mumamiriro ezvinhu akadaro mitengo, kana kuti matengo, zvingasawanika nyore kune vatengi kusvikira misika yakarongeka inotangazve.
Ndiyo chikwata chekufarira iyo sangano rekuchengetedza rinopa mari yakachengetwa muFederal Reserve kune imwe sangano rekuisa mari usiku hwose. Inoshandiswa kuitisa mutemo wemari uye inoshandura kuchinja mune mari inogadzirisa inokonzera kuchinja kwehuwandu hwebasa muhupfumi hweUnited States.
Mari yezvikwereti zvakachengetwa nemabhenji mukati mekutonga kweSweden Reserve Bank.
Ichi ndicho chirevo cheUnited States Federal Reserve Bank.
Iyo inozivikanwawo seFOMC. Uyu ndiwo mutumbi wevanhu vanoita sarudzo yemutemo wemari uchazoitwa muUnited States. IFOMC inonyatsotarisirwa kuvhara Federal Federal rate uye kuderedzwa kwehuwandu. Zvose zviri zviviri zvakakosha mukudzora mararamiro emari anowedzera kukura uye maitiro ehupfumi muUnited States.
Bhodhi reState Reserve System, rakagadzwa neMutungamiri weUnited States kwegore re14, imwe yebhodhi inogadzwawo kwemakore mana seasachigaro.
Iko central banking system yeU.SA, iyo inosanganisira 12 Federal Reserve Banks, inotonga zvikamu zve12 pasi pekutungamirirwa zvakananga ne Federal Federal Board. Nhengo dzeFed dzinomanikidzwa mabhenji akaratidzirwa neChinyorwa cheMari uye anokwanisa kushandiswa kune mabhizimusi akachengetwa nehurumende.
Iro izwi rinoshandiswa mukugadzirwa kwekodzero iyo inoreva kubatsiri uye kushandiswa kwemazinga kururamisa kunogona kugumburwa tisati tadzokera kune kutungamirirwa kwekukurukurirana kwemutengo.
Zadza, kana kuzadza
Ichi ndicho chibvumirano chakakonzerwa nokuda kwe / pakutevedzwa kwekateereri semugumisiro wekodzero yevatengi. Kana kangozadzwa, urongwa hahugoni kubviswa, huri kugadziriswa, kana kukanganiswa nemutengi.
Iko mutengo apo mutero wevatengi kuti vaende kwenguva yakareba kana pfupi ari kutevedzwa.
Izvi zvinorondedzerwa semutengo wemari, inowanikwa mukupindurwa kwechikumbiro chechikwata chakasimba, icho chinopa bhizimisi kana kuti kukumbira mutengo kusvika kumari inotaurwa. Iko mutengo apo iyo kudzokorora chikamu inoda kuita chibvumirano, chekugadzirisa nzvimbo.
Kushandiswa kwemitero uye / kana kushandiswa sechishandiso, pakushandisa mitemo yemari.
Aya ndiwo mazuva emarendari emwedzi yemwedzi akafanana neaya. Kune zvidimbu zviviri. Kuti uwane mamwe tsanangudzo yakajeka ona ruzivo rwemazuva anokosha.
Iyi ndiyo yepamusoro yepamusoro inoshandiswa nevatongi vemari. Iko mari yekutengesa yakaiswa kune imwe mari kana mari.
Inotsanangurwa senzira yekugadzirisa mitero nekugadzira chiyero icho chinoenzanisa vatengi kune vatengesi. Izvi zvinowanzoitika kamwe chete, kana kaviri zuva rimwe nerimwe panguva yakanyatsotsanangurwa nguva. Inoshandiswa nedzimwe mari, kunyanya pakugadza vatashanyi mazinga.
IThe Financial Information Exchange (FIX) protocol yakagadzwa mu1992 uye inowanikwa mumashandiro ekutengeserana emabhizimisi ekutsinhanisa kwemashoko ane chokuita nekutengeserana kwekutengeserana nemisika.
Zvinotsanangurwa sekushandurwa kwenhanho apo mutengo wemari unogadzirwa nemakambani masimba akavakirwa pakugovera uye kudiwa kunofananidzwa nedzimwe mari. Mari inotungamirwa inoshandiswa kupindira nevakuru vakuru vemari. Apo basa rakadaro rinowanzoitika, float inozivikanwa semhepo yakasviba inofamba.
Komiti yeOrumende Inotengeswa Kwemahofisi, iyo iyo komiti mukati me Federal Reserve System ine nhengo dze12 dzinotungamirira mutungamiri wemari yemari. Zviziviso zvinoudza vanhu pamusoro pezvisarudzo zvakaitwa pamitengo yezvibereko.
Izwi rokuti "shanduro yekunze" rinoreva kurega kushandiswa kwekutengeserana mune mari dzedzimwe nyika, hapana kana imwe chete, yakagadziriswa, yakagamuchirwa uye inozivikanwa kushandiswa kwekutengesa forex. Izwi rinogonawo kureva mari yekutengeserana pamakwikwi akadai seMMM kuChicago Mercantile Exchange.
Mutengesi unosanganisira kutenga pamwe chete uye kutengeswa kwemari mbiri pazuva rimwe pamutengo unogamuchirwa panguva yekuguma kwebvumirano, iyo inozivikanwawo se "gumbo rakapfupi", pane rimwe zuva rinotevera mune imwe mukana inobvumirana nguva yechibvumirano - 'rutsoka rurefu'.
"Forex" ndiro zita rakagamuchirwa rechitsinhanho chekune imwe nyika uye kazhinji rinoreva kushandiswa kwekutengesa kune dzimwe nyika mari.
Shanduro yekutengeserana inoshandiswa nevatengesi vepamberi vachiedza kushandura mutsauko mumatengo emarenda maviri. Zvinotora mukana wekupararira kwakasiyana kunopihwa newadhikiti kune rimwe rutivi. Nzira iyi inosanganisira kupindura zvakanyanya kumikana.
Forex market maawa
Zvinotsanangurwa seawa iyo vatori vechikwata chekutanga vanogona kutenga: kutengesa, kutengesa, kutengesa uye kufungidzira pamusoro pemari. Misika yepamberi yakazaruka maawa 24 pazuva, mazuva mashanu pavhiki. Mari yemari inobatanidza: mabhangi, makambani ekutengeserana, mabhizimusi makuru, masimba ekuchengetedza mashizha, hedge funds, vatengesi forex brokers uye vatengesi. Iko mari yepasi rose yemari haina shanduko huru, inosanganisira inyika yose yekutengeserana nevatengi. Maawa ekufambisa maawa anofungidzirwa apo inotengeswa yakazaruka munyika imwe neimwe inobata. Apo misika huru inobatana; Asia, Europe uye muU.SA, iyo yakawanda yekutengesa inoitika.
Izvi zvinoreva kuiswa kwezviratidzo, zvinowanzoshandiswa nevashambadzi vezuva kuitira kuti vatsanangure nokukurumidza kana manzwiro emusika angashandurwa kubva pakashandurwa kuenda kune bearish uye zvakasiyana. Mune mamwe mazwi, inoshandiswa kutsvaga rubatsiro uye maitiro ekuramba. Forex pivot pfungwa dzinotaridzirwa sevhareji ye: yakakwirira, yakaderera uye yakapoteredza (HLC), kubva pakusangana kwezuva rakapfuura.
Paridza kubheti kunobatanidza mabheti pamatengo ekutengeswa kwemari yechikwata, iyo bhiza uye mutengo wemubvunzo.
Paridza femeji dzekutengesa dzinopa mari yekupararira kwekutengesa quote mabhii maviri, mubhadharo uye nemutengo wekubvunza - kupararira. Vatengesi vari kutengesa kana mutengo wemari iyo mari ichave yakaderera pane mutengo webhizimisi, kana kuti yakakwirira kupfuura mutengo wemubvunzo.
Computer software yekutengesa purogiramu yakabva pamashandiro ekutengeserana ekutengeserana, ayo anobatsira kutsanangura kana kupinda mune zvekutengeserana kweimwe mari yepamwedzi mari pane chero nguva ipi zvayo. Forex mabhoti, kune vatengesa vatengesi zvakananga, vanowanzobatsira mukubvisa chinangwa chepfungwa chekutengeserana.
Izvi zvinogona kurondedzerwa sekutengesa kunotsvaga kuongororwa kuti uone kana kutenga, kana kutengesa imwe mari yemari pane imwe nguva, kazhinji zvichibva pane zvigadzirwa zvemashoko zvakagadzirwa nehutano hwekuongorora chati yekushandisa, kana kuti zviitiko zvemashoko makuru uye data. Mutengesi webhizimisi wekutengeserana kazhinji inoumbwa nezviratidzo zvekugadzira kusimbisa kutenga kwavo kana kutengesa zvisarudzo, izvo zvinotungamirira kumashure anobatsira.
Dzimwe nguva inoshandiswa seimwe nzira yekureva kuti 'mberi deal' kana 'ramangwana'. Kunyanya kurongeka nemigumisiro yakafanana sekutengeserana mberi pakati pebhangi nevatengi.
Pamberi yemitengo inodzokororwa maererano nemashoko ekutanga, anomiririra musiyano pakati pepamberi uye mahara. Kuti uwane dhigiriro iri mberi, kusiyana neicho chaicho chekuchinjana, hutungamiri hunove huwedzerwa, kana hubviswa kubva kuhuwandu hwekutengesa. Chisarudzo chokubvisa kana kuwedzera maonero chinotsanangurwa nekusiyanisa pakati pemari yekubhadhara yemari yose inobatanidzwa mutengesi. Mari yepamusoro neyoyo yepamusoro inotora chikamu ichideredzwa kusvika kuchitsiko chechibereko chinowanikwa pasi mumakambani ekutanga. Izvo pfungwa dziri mberi dzinodzingwa kubva panzvimbo yakatarisa. Nharaunda yepasi inotora chikwata chekuda mari inotangira, iyo inotarira mberi inowedzerwa kune imwe nzvimbo, kuitira kuti uwane dhigirii mberi.
Aya ndiwo makuru ehupfumi panzvimbo yepamunharaunda kana yenyika, iyo inogamuchirwa sekuumba nheyo yehuwandu hwehuwandu hwemari, izvi zvinosanganisira zvinhu zvakadai se: inflation, kukura, kutengeserana kwebhizimisi, kukanganisa kwehurumende, nemari yezvibereko. Izvi zvinokonzera huwandu hwevanhu panzvimbo pevanhu vashoma vanosarudza.
Imwe nzira inoshandiswa kuyera kukosha kwekuda kwemari yakasiyana-siyana inowanikwa munhau huru pamusoro pezviratidzo zvemari, mitemo yehurumende, uye chero zviitiko zvinokonzerwa nemari yenyika.
Ichi chirevo chekushandura kune dzimwe nyika, iyo inowanzoshandiswa mazuva ano.
FXCC inonzi brand yepasi rose iyo inobvumirwa uye inotungamirirwa mumatare akasiyana-siyana, ane zvikamu zviviri: FX Central Clearing Ltd uye Central Clearing Ltd.
FXCC inopa demo yebhizimisi purogiramu yepurogiramu, iyo inenge yakazara replica replica yeFXCC yekutengeserana kwekuda kwekutengesa chaiyo. Demo business trading platform inobvumira FXCC vatengi kuti vazive nezveso chaiyo yokutengeserana yemaitiro uye zvigadzirwa, pasina kuisa chero mari ipi neipi kuburikidza nekuita mishandirapati. Nzvimbo yacho haisanganisi maitiro chaiwo kana zvibvumirano, saka chero purogiramu, kana kurasikirwa kunogadzirwa nokushandisa pepanhare kunowanikwa. Icho chinongova chekuenzanisira chete.
FXCC Njodzi Yokuzivisa Dhidhiyo
FXCC Risk Disclosure inorondedzera njodzi dzinobatanidzwa panguva yekutarisana neCFD uye kubatsira muteresi kutora zvisarudzo zvekutsvaga zvinyorwa.
Zvichitsanangurwa sezvinomwe zvinotungamirira maindasitiri munyika iyo: USA, Germany, Japan, France, UK, Canada neItaly.
Iyi ndiyo G7 plus: Belgium, Netherlands neSweden, boka rinobatanidzwa neImF hurukuro. Switzerland nguva nenguva (marginally) inobatanidzwa.
Mhedziso yeGreat Britain Pound.
Ichitsanangurwa sechiito chekutenga mari yemari. Semuyenzaniso; kana mutengi akatenga EUR / USD, vaizove 'vachifamba kwenguva refu' Euro.
Ichi ndicho chiito chekutengesa pair currency. Semuyenzaniso; kana mutengi akatengesa EUR / USD, ivo vaizo "pfupika" Euro.
Izvi zvinotsanangurwa sehurongwa hwekugadzirisa mari, iyo iyo hurumende uye nechepakati pebhanhire, inogadzirisa mari yavo iyo inogona kushandurwa zvakasununguka kuva ndarama nekuda kwezvinhu zvayo zvakakosha. Inenge isingashandisi mari, saka inotarisirwa kuchengetedza zvishoma zvishoma zvekudiwa kwechokwadi. Inotaurawo nezvekukwikwidzana kwemitemo yemari, iyo yegoridhe, kana mabhizimisi ebhangi yegoridhe, inoshanda senzira huru yekutsinhana.
Zvakanaka 'Til Chirairo (GTC chirongwa)
Murairo wekutenga kana kutengesa pamutengo wakatarwa unoramba uchishanda kusvikira uchiurayiwa kana unodzingwa nemutengesi.
Iro izwi rinoshandiswa mubhuku rinomirira mapepa emadhora eU.S.
Zvichitsanangurwa sehuwandu hwezvinhu zvose nehutano hunobudiswa munyika kune imwe nguva.
Icho chiyero chezvoupfumi chakaenzana neGDP pamwe nemari inowanikwa kubva pane zvakabhadhara, mari, kana mari yekutsvaga yakawanikwa kune dzimwe nyika.
ONA: Zvakanaka 'zvakabviswa.
Chigadziko chemwenje chinoratidzwa nechikwereti chakafanana nemuviri ane whisker yakareba kusvika pasi.
Muto wacho unotsanangurwa sekuti nhamba yose chikamu chekutengesa mutengo, kubvisa zviduku. Mumatengesi ekunze kwekunze kwenyika, chibatiso chacho chinorevawo chikamu chemutengo uri kutaurwa unowanikwa mune zvose mutengo wekutsvaga uye kupa mutengo wemari. Semuyenzaniso; kana iyo EUR / USD currency pair ine mukana we1.0737 uye ichitsvaga 1.0740, chibata chaizova 1.07; iyo nhamba yakaenzana neyese yebhadhiro uye yebhadharo yekubvunza. Uyewo inowanzonzi "munhu mukuru" mushonga unowanzoshandiswa semutsara kurondedzera chimiro chakakurumbira chiri kusvika, somuenzaniso, DJIA inosvika 20,000.
Mari yakaoma inozivikanwawo semari yakasimba uye iyo ndiyo inonyanya kukoshesa mari yekutengesa munyika yose. Iko mari yakawanda yakabvumwa munyika yose sezvipo zvekubhadhara kwezvinhu nezvinhu. Mahedheni akaoma anowanzosimbiswa kuburikidza nenguva dzinopfupi uye ari mvura yakawanda mumusika wokutanga. Mahedheni akaoma anokonzerwa kubva kumarudzi ane nzvimbo dzakasimba dzezvematongerwe enyika uye zvematongerwe enyika.
Izwi rebhandi guru kana richida kuwedzera chido chekuda, izvo zvingadzoka mune zvakanaka pane mari.
Ichati chinoshandiswa pakushandura kwekodzero iyo inotsanangura kuchinjwa kwemaitiro, somuenzaniso, kubva pakusimba kusvika kune-bearish trend reversal.
Inosanganisira kubata kwemahofisi marefu uye mapfupi ezvimwe zvinhu zviri pasi.
Iyi ndiyo mhando yekushandura kwegoridhe pamwe chete nemafuta makuru pamwe chete panguva imwe chete, yakaitwa nokukurumidza zvikuru.
Iko inotengeswa yepamusoro yekutengesa kana mutengo wakaderera kune imwe yenheyo yepasi yezuva ranhasi rebhizimisi.
Iri izwi rinoshandiswa kurondedzera chiito chevatengesi veimwe mari mari, kana vachitengesa pamusika wekutsvaga kwemusika.
Iyi ndiyo mari yekushandiswa kweHong Kong yeHorld (HKD), iyo mari yeHong Kong. Iko yakagadzirwa neCNCX centi, inowanzomiririrwa neiyo $, kana HK $. Zvitatu zveChinese zvakabudisa mabhanga zvine kodzero yekubudisa Hong Kong madhora, zvichienderana nehurumende yeHong Kong. HK $ inotungamira kuburikidza nehurumende kuchinjana mari inobhadhara US $ madhora munzvimbo.
Maererano nekutengesa mari, izvi zvinotsanangurwa semutengi weparadhesi maviri.
Zviratidzo zveMakamuri Veimba
Masoko anotengesa hutungamiri hwehupfumi hunoenderana nehumba, kunyanya muU.SA neUnited States, zvichibva pane zvinyorwa zvekuvakwa kweimba.
Iyi ndiyo nhamba yemapurojekiti matsva ekuvakira (dzimba dzevanhu vari voga) dzakatanga panguva ipi zvayo yakatarwa nguva, inowanzo kutaurwa mwedzi mumwe nomumwe kana gore negore.
Ichimoku yakagadzirwa mushure meHondo Yenyika II, seyemari yekufananidza mari yekutengeserana, chiitiko chinotevera chiratidzo ichicherechedza midzi yepakati pezvakaitika kare uye yakasara pane dzimwe nguva dzenguva. Chinangwa chechiratidziro ndechekuita zviratidzo zvebhizimisi zvakafanana nezvo zvakasikwa nekufamba kwemativi, kana nekubatanidzwa kweMACD. Ichimoku mitsara yechishandiswa inofambiswa mberi munguva, ichiita ruzivo rwakakura uye nzvimbo dzinodzivisa, zvingangoita izvi zvinoderedza ngozi yekukanganisa nhema.
I International Monetary Fund yakagadzwa mu1946 kuitira kupa zvikwereti zviduku zviduku uye zvepakati pepasi.
Icho chiyero chinokonzerwa nemusiyano pakati pezinga rekuona uye chiyero chamangwana pane mutengesi.
Iko mari iyo inokonzerwa nemitemo yekunze kune dzimwe nyika kana zvigadziro zvepanyama haigone kuchinjana kune imwe mari. Inconvertible currencies inogona kudziviswa kubva mune zvekutengesa, zvichida kunyanya kukwirira kwekutsvaga, kana nekutongwa kwezvematongerwo enyika.
Chimwe chisinganzwisisiki ndeye apo USD inoshandiswa mari yepasi yejeri uye kwete mari yekududzira. Sezvo USD iine mari yakawanda munyika yose yemari kushandiswa kune dzimwe nyika, inowanzoshandiswa semari yepasi uye nedzimwe mari, semuenzaniso yen yenyika yeJapan kana yeCanada inoshandiswa semari yemari.
Chiratidzo chezvoupfumi chinotarisa basa rekutengeserana. Inoparidzirwa neGerald Reserve Board yeU.SA pamwedzi uye inoyera kubudiswa kwemigodhi, kushandiswa, uye zvinobatsira.
Zvinotsanangurwa sekusimudzirwa kwemitengo yezvinhu zvekutengesa, zvakananga zvakananga nekuderedzwa kwesimba rekutenga.
Pakutanga Marginal Requirement
Izvi zvinorondedzerwa sechinhu chiduku chinotarisirwa marginal balance, kuitira kuti ugadzirise nzvimbo itsva yakasununguka, apo Mutengo Wokutanga unofanirwa kunge uri pasi kana kuti wakaenzana nemuganhu uripo. Maitiro ekutanga emiganhu anokwanisa kuratidzirwa se peresenti (somuenzaniso; 1% yemadhora emadhora eAmerica), kana kuti inogona kuverengwa nehuwandu hwehuwandu.
Misika ye interbank inotsanangurwa seyo pamusoro pemakambani ekutengeserana nevatengesi, mukutengeserana kweFX vaizoita kusika misika mune imwe shanduko kune imwe nyika.
Foreign exchange rates quoted between international banks.
Iyi ikambani inoshandiswa pakubhadharisa mari inoshandiswa muhutano (kana kuti maOct derivatives), iyo inoshanda semurevereri pakati pevatengesi vakura nevatengesi vemabhizimisi. Semuyenzaniso; nhengo dzeLondon Stock Exchange, dzinongobvumirwa kutarisana nevashambadziri, kunze kwevanhu vose.
Mari inotambirwa kushandisa mari. Nharaunda dzinoshandiswa dzinoshandiswa nemitengo inowanikwa neFed.
Chikamu Chokutora Parity
Sekuguma kwechiitiko ichi, chido chekuda kuenzana uye kusiyanisa pakati pekufambira mberi nekukwira kwemavara pakati pematare maviri akaenzana. Chido chehutano hunobatanidza: chikwata chekuda, mahara ekutsinhanisa mahara uye kune dzimwe nyika mari.
Icho chinhu chinoitwa nechepakati chinokanganisa kukosha kwemari yavo, nokutengesa kana kutenga mari yekune dzimwe nyika mukutsinhanisa ivo voga pamba, sechiedza chekuita shanduro yekushandura.
Zvichienzaniswa sezviitiko zvinotungamirirwa nekambani yeFXCC mukati mezuva. Kazhinji akavharwa nechepedyo.
Kunotsanangurwa semunhu, kana sangano repamutemo rinotumira vatengi kuFXCC, kazhinji mukudzorera kubhadhara maererano nemari yekubhadhara pamutengo. Vachizividzi vadziviswa kubvuma mari yakatarwa kubva kune vatengi vavo.
Inotsanangurwa sechibvumirano icho boka remari rinochengetedza hukama hwakashamwaridzana hukama kune mumwe nemumwe, apo mari yavo inofambidzana pamwe chete neimwe mari inobvumirana nemamiriro ekugovera uye kudiwa mumusika wokutsinhana. Iko mabhizimusi makuru anobatanidzwa muchibvumirano ichi anochengetedza kusungirirana kwekutengesa kuburikidza nekuzvitengesa uye kutengesa mari dzomumwe nomumwe.
Iyi ndiyo mari yekushandiswa kweJapan yenyika (JPY), iyo mari yeJapan. Yen inosanganisira 100 Sen, kana 1000 rin. Yen inowanzomiririrwa (sechiratidzo) nehesi yekutanga Y, ine mitsetse miviri yakanyatsopinda nepakati.
Zvichitsanangurwa semari inoshandiswa seyo inoshandiswa mumitambo yepamarudzi ose uye pakagadzirisa shanduko yemari. Central mabhangi anochengetedza mahedheni emari muchengeterwe uye US dollar inoonekwa senyika inonyanya kukosha mari.
Chiteshi cheKeltner chakagadzirwa uye chakasikwa mu1960 naChester W. Keltner uye chakanyorwa mubhuku rake "How To Make Money in Commodities". Keltner Channels inoronga mitatu mitatu, inoumbwa ne: iri nyore kufamba inowanikwa, nechepamusoro nechezasi mapoka akarongwa pamusoro apa uye pasi pevheji iyi inofamba. Iyo yakawanda yezvikwata (kusika mukana), yakabva kune imwe shanduko yakashandurwa chinoshandiswa kune Average Value Range. Ichi chigumisiro chinowedzerwa uye chinodzingwa kubva pakati pepakati pevhesi yemutsetse.
Ziva Mutengi Wako, iyi ndiyo nzira yekuteerera inoteverwa nemakambani ekutengeserana akadai seFXCC.
Kutungamirira uye kuisa zviratidzo
Inenge yose (kana isiri iyo yose) zvikwangwani zvoukodhi zvakasakara, havatungamiri; havana kupa uchapupu hwokuti, somuenzaniso, mari imwechete ichaita nenzira imwe neimwe. Zvimwe zvinyorwa zvitsva zvinogona kutungamirira, zvichipiwa kuti zvinogona kuva chiratidzo chinotevera chezviitiko. Kuongororwa kwevatengi kutenga michero munguva yemberi kunogona kuratidza hutano hwezvitengesi. Kuongororwa kwehurumende yekuvaka dzimba kunogona kupa uchapupu hwemitezo yavo yekuzvipira kuvaka dzimwe dzimba. Ongororo ye CBOT inoratidza kuti vatengesi vanozvipira vakaita kuti vatenge uye vatengese zvimwe zvigadzirwa zvemari.
Kutengesa mari yakambotaurwa, inozivikanwawo sekutora mutengo webhadharo yemashoko acho.
Kukosha kwe "nyika yekushandiswa kwemari, iyo yave ichizivikanwa nemutemo seyo nzira yepamutemo yekubhadhara. Mari yemunyika inonzi inofanirwa kutengeserana munyika dzakawanda, uye inoshandiswa kubhadhara mutoro wega wega kana wevanhu, uyewo kugadzirisa zvipikirwa zvemari. Munhu ane chikwereti anosungirwa kugamuchira mutemo wemutemo kune kubhadhara chikwereti. Mutemo wepamutemo unobviswa nehurumende yenyika yakagamuchirwa, yakadai seHurumende yeUnited States muUnited States uye Bank of England muUnited States.
Iri ndiro kutonga kwemaonero makuru ekunyora, kuburikidza nekushandiswa kwemari shoma yemari.
Mutoro inosungirwa kuendesa mari yakawanda pane imwe nguva yakatarwa kune imwe nguva.
I London Inter-Bank Inowanikwa.
Kurongeka kwemugumo kunogona kushandiswa kuisa bhizimusi kupinda mumusika pamutengo unotsanangurwa. Kana imwe nguva mutengo wemusika unosvika mutengo wakatarwa, urongwa hunogona kukonzerwa (muganhu wekugadzirisa hauna kutsigira kuti urongwa huchazoitwa) pamutengo wakatarwa mutengo. Izvo zvinogona kuitika, nekuda kwekutsvaga mumusika kuti misika inosvika pamutengo wekugadzirisa uye inobva yadzoka shure kubva pamiganhu yekutengesa, uye zvishoma zvishoma kutengeswa. Zvadaro, kurongeka kwemuganhu hakungagadziriswe uye kucharamba kuri kushanda kusvikira nguva iyo inogona kuurayiwa kana kusvikira mutengi achizvidira kubvisa urongwa.
Uyu ndiwo mutengo uyo muteresi anotsanangura paanenge achiisa mutemo wakakwana.
Iyo isina mutsara wechati inobatanidza mitengo dzisina kuroorwa kwenguva yakasarudzwa.
Iyi ndiyo mamiriro mumusika uko kune zvakakwana yehuwandu inotengeswa, kuitira kuti utenge nyore, kana kutengesa zvishandiso zvinowanikwa (kana kuti pedyo ne) zvakatorwa mitengo.
Kunotsanangurwa sechitengeserano icho chinokanganisa, kana kupedza nzvimbo yakambosimbiswa.
Kana kambani yekwereti isina mari yakakwana yekuchengeta nzvimbo dzakasvinudzwa, kuregererwa kuchaitika zvichienderana nehuwandu hweakaunti iyo ichavhara nzvimbo dzakasvinudzwa pamutengo wakanakisisa uripo panguva yakatarwa. Muteereri anogona kudzivisa kuvharwa kwebhuku ravo uye nzvimbo kuburikidza nekuisa margin anowanikwa mubhuku, kana nokuvhara nzvimbo iripo yakazaruka (s).
Iri ndiro izwi rinoshandiswa kurondedzera huwandu hwehuwandu hunowanikwa kutenga, kana kutengesa pane imwe nguva nenguva.
Somugumisiro wehurukuro yemusangano weLondon Gold Pool (Scotia-Mocatta, Deutsche Bank, Barclays Capital, Societe Generale neHSBC), mutengo wega wega wezvinhu zvinokosha, zvakadai segoridhe, sirivha, platinum uye palladium inorongwa zuva rega rega zvigaro pa10: 30 (London inogadzirisa) uye 15: 00 GMT (London inogadzirisa zuva). Nzvimbo yeLondon yekugadzirisa mutengo inofungidzirwa yakagadziriswa kana musangano wekugumira unopera.
Apo mutengi akazarura nzvimbo itsva yekutenga mari yemari, inofungidzirwa kuti akaenda 'kure'.
Mutengesi uye slang term ye USD / CAD currency pair.
Ichitsanangurwa senhengo inoshandiswa kuyera kukosha kwekutengesa. Kutengeserana kunotumidzwa nenhamba yezvikwereti zvinotengeswa, panzvimbo yekuti mari yavo inokosha. Icho chirevo chemazuva ekutengeserana chinoreva kurongeka kwechina chechina 100,000.
Icho chiratidzo chinoratidza kuwirirana pakati pezvikamu zviviri zvinofamba uye kuti vanobatana sei kana mutengo uchichinja. Icho chiito chinotevera chiratidzo chekukura.
Iyi ndiyo miganhu yakaderera inodiwa, iyo mutengi anofanira kuva nayo paFXCC, kuitira kuti arambe akazaruka, kana kuti gadzirisa nzvimbo yakasununguka.
de Pares de Bases Major
Maviri makuru anoreva mari yechikwata chinonyanya kutengeswa mumusika we forex, sa EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF. Aya makuru makuru emari anotengesa misika yepasi rose, iyo USD / CAD neAUD / USD pairi inogonawo kutaridzirwa semasimba, kunyange zvazvo vaviri ava vachiwanzozivikanwa se "mutengo wemaviri".
Izvo zvikamu zvose zvinobva pakugadzira chikamu cheVhizimusi Zvikwereti.
Kutungamirirwa Nhoroondo dzeAkate
Iri izwi rinoshandiswa apo mutariri wemari achange achibhadhara mari yekambani yevashandi nenzira imwechete yekubhadhara mutariri wekutsvaga mari, kuitira kugadzirisa rekutsvaga kwekuita kwekutsvaga, semuenzaniso, zviyero.
Margin Call inowanikwa apo vatengi vepakati yepamutengo inodonhera ku 100% sekugadzwa neFXCC. Muteereri ane sarudzo yekuwedzera mari kuitira kuti asangane nemiganhu yepamusoro uye kudzivisa Stop Out kana kuti anogona kugadzirisa maitiro mashoma anobatsira.
Izvi zvinotsanangurwa sehuwandu hwevatengi vemari yakagadziriswa kupikisa nzvimbo dzakabatanidzwa dzakasununguka.
Nharaunda uye maitiro zvakabatana. Nenzira, iyo yakaderera iyo miviri, yakakwirira mumuganhu
Inofanirwa kuchengetedza nzvimbo yakazaruka uye zvakasiyana. Mathematically akaratidza; margin = nzvimbo yakasununguka / yepamusoro yekutengesa chiyero. Semuyenzaniso; USD / CHF 100,000 USD nzvimbo panzvimbo yepamusoro yebhizimisi yehuwandu hwehuwandu hwe100: 1, ichatoda margin akapikira akaenzana ne100,000 / 100 kana $ 1,000. Kuti uverenge marginal for currency pairs, uko USD haisi iyo yekutanga (yekutanga) mari (eg EUR / USD, GBP / USD) nemigwagwa (EUR / JPY, GBP / JPY), uye mari yemari yemari inotanga kushandurwa ku USD, kuburikidza uchishandisa mashizha ekushandura (s). Muenzaniso; kana mutengi atenga 1 yakawanda ye EUR / USD, kana mutengo uri 1.0600. Saka, 100,000 EUR yakafanana ne100,600 USD. $ 100,600 / 100 yeverage ratio = $ 1,006.00
Izwi rinoshandiswa panguva chaiyo yezuva apo mushamba unovhara, izvo zviri 5 PM EST yeChishanu nokuda kwemavara forex brokers.
Inoratidza kutenga / kutengesa mirairo mumusika weimwe chiridzwa.
Kakawanda inoshandiswa ne STP uye ECN brokerages, iyi ndiyo nzira yekuuraya kana mutengesi asina kuvimbiswa kuwana mutengo unocherechedza pachikero chemugumo, asi unofanirwa kuwana dhizimusi rinourawa. Hakuzozve kudzokorora zvakare nerudzi urwu rwekuuraya.
Muiti wemusika anotsanangurwa semunhu, kana akasimbiswa kubvumirwa kugadzira nekuchengetedza misika mune chiridzwa.
Mutemo wemusika unotaridzwa semutemo wokutenga, kana kutengesa sarudzo yakasarudzwa mari, pamutengo wekutengeserana uripo. Mirairo yepashamba inourawa pamutengo unoratidzwa panguva iyo user vanoshandisa bhatani 'BUY / SELL'.
Ndiyo mari pairs 'yemazuva ano yekuti mari imwe chete inogona kuchinjana kune imwe nguva chaiyo.
Inoreva njodzi inogona kubuda pamakambani emakambani, somuenzaniso, kupa uye kuda, izvo zvichiguma zvichikonzera kukosha kwekutsvaga kwekutsvaga kuchinja.
Iri ndiro izwi rinoshandiswa kuratidzira ukama hwehuwandu hwehutano, hunoenderana nehutano hwekusununguka.
Kunotsanangurwa sezuva rekugadzirisa kwekutengeserana kunotanga kusarudzwa nenguva yekupinda mukonesheni.
Maximum Trading Kubatsira Ratio
Kubatsira kunotsanangurwa sechiyero, chinowanika kuzarura nzvimbo itsva. Iyo inobvumira vatengesi kupinda mumusika nepamusoro-soro mabhizimusi kupfuura kutanga kwokuti mari yacho ingavabvumira. Semuyenzaniso; chikwata chechikwereti che100: 1 inobvumira muteresi kukwanisa kudzora $ 100,000 nzvimbo yakawanda, ne $ 1,000 yemuganhu ($ 100,000 / 100 = $ 1,000).
Ndicho chibvumirano chiduku chiduku chezvikwata zveshamba mukutengesa Forex iyo yakaenzana nezvikwata zve1,000 zvebhadha rekuda.
Mikombe michina inoita kuti vatengesi vadzidzisi vashandise kutengesa zviduku zvishoma uye saka vaderedze ngozi yavo zvikuru.
Munhoroondo duku, vatengi vanogona kutengesa michina yakawanda, saka iyo nhamba yekambani inowanzozivikanwa pakati pevatengesi vese vanogona kutenga zvishoma.
Iyi nhoroondo yebhuku inoita kuti vatengesi vapinde mumusika vane zvigaro zve 1 / 10 ukuru hwejairo yakazara.
Mini majenya ane mari yekutengeserana ukuru we0.10, uko kukosha kwepipu imwe kana yakatorwa muDHA yakaenzana ne $ 1.
Minor currency pair, kana kuti "vana" vanobatanidzwa nedzimwewo mari dzakawanda pairi uye muchengeti wemari. Semuenzaniso, tinogona kuisa Euro ichirwisa pondo yeUk (EUR / GBP) sediki shorter currency pair, pasinei nokuti inotengeswa zvakanyanya uye kupararira kunogara kuri pasi. Dhora reNew Zealand rinopesana neUnited States Dollar (NZD / USD) rinogonawo kuenzanisirwa semari duku duku mari, pasinei nokuti inowananidzwa se "peji yezvinhu".
Iyo inyanzvi yekutengesa iyo inobvumira varairidzi kuti 'vashandise mutengesi' vamwe vatengesi vepamberi nevasimari. Vaizokopa zvinyorwa zvevamwe vatengesi izvo zvicharatidza munyaya yavo yekutengesa.
Mwedzi-pa-mwedzi. Kushandiswa kunoshandiswa kuverenga kuwandisa kwemazana ematambudziko panguva yemwedzi.
Izwi iri rinoshandiswa apo mutengesi ari kutarisa pfupi nguva pfupi kutungamirirwa kwekutengesa kwemari, kwete zvisizvo. Nzira yacho inongowanikwa chete pakukura.
Mari yeMusika Hedge
Ngarava yemari yemari ndiyo nzira yekudzivirira kusagadzirisa kushambadzira kwemari uye inobvumira kambani kuderedza mari yekutengesa kana uchiita bhizimisi nekambani yekunze. Asati aita mutengesi, kukosha kwekambani yekunze kwekambani kuchavharwa mukati, kuitira kuti ivimbise mari yekushandiswa kwemazuva anotevera uye inoita kuti kambani yepamusha iwane mutengo iwoyo uye unoda kubhadhara.
Kufamba Avhareji (MA)
Kunotsanangurwa senzira yekufambisa chikwata chemutengo / kuwedzerwa dhidhiro kuburikidza nokutora mutengo wekutengeswa kwemashoko mararamiro ehutsika.
Izvi zvinoitika apo kune uwandu hwakaderera mumusika asi hukuru hunoshandiswa mumitengo uye kupararira kwakakwirira. Mumukati mutsva kazhinji pane nhamba yakaderera yebhadhi / kubvunza zvinowanikwa.
Zvichitsanangurwa sechinhu chisingafadzi (SWAP) chinoputika pane imwe nzvimbo usiku humwe.
Mukutsvaga maitiro ekuenzanisa, nheyo yeMusoro neEmberi kana yakatarisana nayo.
Net Interest Interest Rate Differential
Iyi ndiyo misiyano muzvikwereti zvemari kubva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzemari. Somuenzaniso, kana mutengesi ari kure muEuro / USD, ndiye ane own Euro uye ari kukwereta mari yeUnited States. Kana iyo nzvimbo yakatarwa yeEuro i3.25% uye iyo nzvimbo / inotevera muU.S. is 1.75%, ipapo mutsauko unofarira ndewe 1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%).
Ichitsanangurwa senzira yekugadzirisa, pasi pacho chete kusiyana kwezvinhu zvakatengeswa mari kunogadziriswa pakuvhara.
Nzvimbo yepamusoro ndiyo mari yakatengwa kana kutengeswa iyo isingaenzaniswi nechimiro cheyero yakaenzana.
Inotsanangurwa sechinhu chisina kukwana. Inogonawo kutumidzwa semutengo wemari.
Chirongwa chekutengesa pakati pe8: 00 AME '5: 00 PM EST. (New York Time).
Kutarisa se data data yakashandiswa mukutengesa mapurisa ekupa vashandisi nguva dzose zvinongororwa zviripo.
Kwete Kubata Dheki (NDD)
FXCC i "no dealing dek" forex broker. NDD inotsanangurwa sekusabvumirwa kunosvika kumisika ye interbank, uko mari dzedzimwe nyika dzinotengeswa. Forex brokers vachishandisa nzira yekuenzanisira iyi yekuendesa kuchitengesa vashandi vemari, panzvimbo yekutarisana nemumwe mutengi wemari. Mutengesi wevatengesi anopiwa kune vakawanda vanopa, kuitira kuti muwane mari yekukwikwidza uye kukumbira mitengo.
Iro izwi rinoshandiswa kutsanangura mamwe mafambiro emitengo isingagoni kutsanangurwa nehukuru kana hutsika zvinhu.
Datatimendi data yakaungana neU.B. Bureau of Labor Statistics, iyo inofanana nemari yekubhadhara yehuwandu hweUnited States. Iyo haina kusanganisira: vashandi vemapurazi, vashandi vomumhuri yega, kana vashanduri vasiri sangano. Icho chiratidzo chakakonzerwa mwedzi mumwe nomumwe.
Notional kukoshesa pane zvigadzirwa zvemari ndiko kukosha kwechigaro mumadhora emari.
Ndicho chirevo cheNew Zealand dollar uye US dollar currency pair. Inoratidzira kune vatengesi mari yakawanda yeUnited States inodiwa asi imwe yeDhora reNew Zealand. Kutengesa iyo NZD / USD currency pair inowanzonzi "kutengesa Kiwi".
OCO Order (One Cancel the Other Order)
Chirongwa chekurongeka apo kumira uye kugadzirisa kurongeka kunowanikwa panguva imwechete uye kana imwe yekutengeserana inourawa, imwe yacho ichabviswa.
Uyu ndiwo mutengo apo mutengesi anotarisa kutengesa mari. Chipo chacho chinonziwo mari yekubvunza.
Izvo zviitiko zvinogona kuitika mumusika wekutanga, izvo zvinowanzoitika kwenguva pfupi uye zvinomiririra kuitika apo nhamba yevatengesi vachitengesa chiridzwa chinodarika nhamba yevatengesi vanoda kutenga.
Iri ibasa rinoshumira kubvisa, kana kuderedza zvimwe, kana kuti zvose zvemusika kune ngozi.
Mukadzikadzi weTtlineneedle Street, izwi kune bhandi guru reEngland.
Iyo nhoroondo iri pakati pevatengesi vaviri apo mabhizimisi evanhu nekutengeserana vanobatanidzwa mubhuku re omnibus, pane kusarudzwa zvakasiyana. Zuva rakashambadzirwa mutengesi rinozarura nhoroondo iyi kune imwe kambani, apo kushandiswa kwemaitiro uye maitiro muzita remugadziri webhuku inoitwa.
Ichitsanangurwa senyika inotendera shanduro yekubvumirana kushandiswa kwemari yenyika. Mutengo wekutsvaga inotengeswa uye inowanikwa mumakombiyuta anobatanidza mabhizinesi, online currency exchange uye forex brokers inobvumira kubhadhara mari inoshandiswa.
Kuedza kupfupika pamusika, pamutengo wemari wezvino.
Izvo zvose zvikwereti zvisingabvumirwi zvibvumirano zvakaitwa nevatengesi vemisika pamagumo ezuva rese rekutengesa.
Iyo inotsanangurwa sehurongwa huchazoitwa kana kemusi ichifamba uye kusvika pamutengo wakatarwa.
Chero chinzvimbo chakasvinudzwa nevatengesi chisina kuvharwa nechinhu chakaenzana kana chinopesana chikamu chakafanana.
Vhura Position window
Firiji yeFXCC iyo inoratidza zvose zvinowanikwa mamiririri emakero ayo akazaruka.
Mirairo inotsanangurwa seiri murairo kubva kune vateereri kuti vatenge kana kutengesa imwe mari yemari mbiri, kuburikidza neFXCC yokutengeserana. Mirairo inogona kugadziriswa inotambidzwa zvakare, kana mutengo wemusika uchisvika pamutengo wekutengesa waakatengesa.
OTC Marginaled Foreign Exchange
Pamusoro pekambani (kubva kune imwe shanduko) kune dzimwe nyika mari dzekushandura, umo vatengi vemisika, vakadai seFXCC nevatengi, vanopinda muchibvumirano chekukurukurirana, kana kuti zvimwe zvekutengeserana zvakananga kune mumwe nemumwe, kune imwe nzvimbo iyo yakaiswa uye inopikisana nepamusoro pezvinzvimbo.
Chiitiko kana nyika ine hupfumi huri nani huripo kwenguva yakareba, zvichiita kuti kuwedzera kwekutsvaga kwekutsvaga kusingakwanisi kutsigirwa nehuwandu hwekubatsira kunogona kutarisana nehupfumi huzhinji, izvo zvinowanzoguma nemigumisiro inowedzera kudiwa uye kuwedzera kwekuwedzera.
Zvinotsanangurwa sechibvumirano kubva nhasi kusvika musi webhizimisi unotevera.
Parity inowanikwa apo mutengo weassetsi unofanana nemutengo weimwe yefa, somuenzaniso; kana imwe euro ichienzanisa nedhora rimwe reAmerica. A "mutengo wemari" inoshandiswawo kuchengetedzwa uye zvinhu, kana zvinhu zviviri zvakaenzana. Vatengesi vekutengesa kushandiswa uye vatengesi vanogona kushandiswa pfungwa yemari yevanhu, kuti vaone kana zvichibatsira kushandura chisungo muzvikwereti.
Chidimbu chinotsanangurwa sechikamu chiduku chiduku chekutengesa icho chikamu chekushandurwa chinowanikwa, zvichibva pamusangano wemisika. Mazhinji emabhizimisi makuru makuru anotengeswa kusvika mana, nzvimbo shomanana ndeye yekupedzisira decimal point. Kune vakawanda vaviri, izvi ndizvo zvakaenzana ne1 / 100 ye1%, kana imwe nheyo yepamusoro.
Kukosha kwepipi imwe neimwe mubhizimusi rakapiwa, iro rinoshandurwa kuva mari yebhizimisi yemari.
Pip value = (imwe pip / shanduro yemari).
Izvi zvinoonekwa sekuti mitemo isinganzwisisiki ichiri kumirira uye ichimirira kuurayiwa, pamutengo wakatarwa nemutengi.
Kuratidzirwa kuchinje muhurumende yehurumende iyo inogona kuva nemigumisiro inopikisa pane chinzvimbo chemari.
Kuchengetwa kwemaawa mashoma kana kuwedzera kuduku mumatengo ekufamba.
Zvinotsanangurwa sezvipikirwa zvakakwana zvacho mune mari yakapiwa. Chigaro chinogona kunge chakaita sechinhu chakaputika, kana nzvimbo yepamusoro (pasina kufambisa), yakareba, (yakawanda mari yakatengwa pane inotengeswa), kana shoma (mari yakawanda inotengeswa kupfuura inotengwa).
Net positive (SWAP) kufarira kuchengeta nzvimbo yakasvinudzwa usiku humwe.
Zvimwe zvinyorwa zve GBP / USD pair.
Mutengo unoshandiswa nemari kana mari yepasi inogona kutengeswa kana kutengwa.
Mutengo wekutengesa unoumbwa nokuisa mitsetse miviri yakafanana pane chati yeiyo yaidiwa. Zvichienderana nekutenderera kwemusika, mutambo unogona kukwira, uchiburuka kana wakananga. Mitsara inoshandiswa kubatanidza nepamusoro uye yakasununguka, uko iyo yakakwirira inomiririra kukwirira kwepamusoro uye mutsara wezasi unomiririra rutivi rutsigiro.
Iyi ndiyo kubuda kwemashamba emari (nguva chaiyo, kana kunonoka).
Iyo inofanirwa kumusika mitsara iyo imwe neimwe yevatengesi vemakethe inokwana kuwanika.
Kutaura sechikwata chinogara chiripo mune imwe nzira.
Ndiyo muyero unoshandiswa kuverenga maitengo ekukweretesa nemabhangi muUnited States.
Mutengo Wekuenzanisa Indekisi (PPI)
PPI inotarisa mutengo unoshandiswa pahuwandu hwehutengo hwebhasikiti yakasimbiswa yemutengo, kubhadhara vatengi zvakanaka maitiro anotorwa nevarimi, uye vanoita sechiratidzo chekuuya kwekutengesa mutengo kuchinja.
Kuvhara kana kusunungura kwechigaro kuitira kuti uwane purofiti.
Chiratidzo chezvoupfumi chinoshandisa simba rezvemari rekugadzira. Nokuunganidza kuongororwa kwemwedzi wega wega. Vatungamiri veZ300 vanotenga, inopa ruzivo rwemamiriro ebhizimisi uye inoshanda sechisarudzo chokutora chevatungamiriri.
PSAR, Parabolic Stop uye Reverse (SAR)
Icho chiratidzo chinoshandiswa kurondedzera kutarisa kunomira kwemafupa marefu uye kwenguva refu. SAR inzira inotevera nzira.
Quarter-on-quarter. Kushandiswa kunoshandiswa pakuverenga kuwandisa kwepakati muzvikamu zvakasiyana-siyana.
Iyo inoshandiswa nemari yemari inoshandiswa neCentral Bank kuderedza mutengo wemari uye kuwedzerwa mari inowanikwa nokutenga zvikwereti kubva pamusika. Izvi zvinangwa kuwedzera zvakananga kushandiswa kwemabhizimisi ega ega mune zvehupfumi uye kudzoka kwekutengesa kwezvinangwa.
Zvinosanganisira bhizimisi uye vanoda kubhadhara mari mbiri.
Sokutengeserana Forex inosanganisira mari yepakati, quote mari inomiririra mari yechipiri mune peji.
Semuyenzaniso; ne EUR / GBP, pound yeUn is currency quote uye euro ndiyo mari yepasi. Muchirevo chakananga, mari yakataurwa yakagara iri mari yekunze. Mune dzimwe nzira dzisina kufanirwa, mari yekududza nguva dzose inowanikwa mari yemari.
Iyo nguva inopfuurira yekuwedzera mumutengo wefa.
Range rinogona kurondedzerwa sehupakati pakati pemutengo wepamusoro uye wepasi wemari, chibvumirano chemangwana kana chirevo munguva yakatarwa. Izvo zvinoratidzawo kuti mutengo wekutengeserana.
Range bhizinesi rinozivisa kana mutengo wacho uchichinja mumugwagwa uye uchishandura unyanzvi hwekugadzira, hutsotsi hukuru nekusimbisa maitiro zvinogona kuonekwa, zvichibvumira mutengesi wekutengesa kuita sarudzo yekutenga kana kutengesa uye chiridzwa zvichienderana kana mutengo uri pedyo nechokumusoro kwe chiteshi kana pedyo nepamusoro.
Zvichitsanangurwa semutengo wemari imwechete maererano nemamwe, kazhinji kusangana neDH.
Yakagadziriswa P / L
Iyi ndiyo purogiramu uye kurasikirwa kunowanikwa munzvimbo dzakasungwa.
Kunotsanangurwa sekudzorera kwechikamu chekubhadhara kwepakutanga kweimwe sangano (eg Forex commission / kuparadzirwa kwekupararira).
Kudzoka kunoreva kuitika apo hupfumi hwenyika huri kunonoka uye iwe uri kuderera mubhizinesi.
Uyu ndiwo misika inotungamirirwa, kazhinji nehurumende yehurumende inobudisa nhamba yemitemo uye zviremera zvakagadzirirwa kuchengetedza vatengesi.
Simba rekutsvaga simba Parity
Apo nhamba munyika dzingasiyana kubva kune chimwe chinhu chakagadzirwa nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu pane nguva yakawedzerwa. Zvikonzero zvekusiyana kwemutengo kunogona kusanganisira: mitero, kutumira mari uye kusiyana kwemhando yemiti.
Relative simba index (RSI)
A momentum oscillator, iyo iri chiratidzo chinotungamirira. Inoyera simba nekushaya simba maererano nekugadzirisa kwekutengeswa munguva yakatarwa yebhizimisi.
Central Bank of Australia.
Bhengi reNew Zealand (RBNZ)
Iyo Central Bank yeNew Zealand.
Mamiriro emusika anowanzoitika apo mutengesi anotanga kushandiswa kune imwe mutengo, asi mutengesi anodzorera chikumbiro nemashoko akasiyana. FXCC inopa vashandi vayo nzira yakakwana yekuwana mvura yeExx Forex ECN mufananidzo umo vatengi vose vanowana kuwanika zvakafanana kune imwechete misika yemisika uye mishonga inourawa pakarepo, pasina kunonoka kana kudzokorora zvakare.
Kazhinji zvinonzi "zviwanikwa" izvi zvinogona kutaridzirwa: mari, zvigadzirwa, kana imwe mari yemari, inotarisirwa nevatungamiriri vemari. Semuyenzaniso; mabhandi ekumusoro angashandisa zviwanikwa kuitira kuti awane mari: kutengesa kusaenzana, kutarisa zvinokonzerwa nekuchinja kweFX uye kutarisa zvimwe zvinetso iyo bhangi guru rakagadzirirwa. Reserve assets inowanzoswa mvura uye zvakananga pasi pesimba rekutonga kwemari.
Inofungidzirwawo kuti ive mari yakachengeteka. Inowanzobatwa muzvikwereti zvakanyanya nemabhanki makuru kuitira kuti ishandiswe kubhadhara mhiko dzenyika dzose dzezvikwereti.
Chinotsigira Point, kana Nhamba
Iyo inoshandiswa mukugadzirwa kwekodzero uye ingangodaro mutengo kana urongwa huchagadzirisa kufamba kwekunze kwekunze kwenyika kuenderera mberi. Kana iyo yezinga yakaputsika, zvino zvinotarisirwa kuti mutengo wemutengo uchaenderera mberi uchienda mberi.
Retail Foreign Exchange Dealer - RFED
Muzviitiko apo kutengesa kwekutengesa kana kutengesa zvigadzirwa zvemari hazvisanganisi chero kugoverana, vanhu kana masangano vanofanirwa kuita sendipi-sangano. RFED inoshanda mukutengeserana inosanganisira mikana yemazuva ano, zvisarudzo pane ramangwana mikontiro uye kusarudza zvibvumirano nevatori vechikamu vasina kukodzera kubatanidzwa.
Retail Investor & Retail Mutengesi
Kana mutengesi / mutengesi ari kutenga kana kutengesa zvigumisiro, CFD, mari, zvikwereti, nezvimwewo nokuda kwenyaya yake yega, iye / anoonekwa somutengesi wekutengesa / mutengesi.
Mutengo Wekutengesa Index (RPI)
Icho chiyero chekushandurwa kwekutengesa kwezvinhu zvekutengesa nemabasa. Mukuwedzera kune CPI, RPI zvakare chiyero chekutengesa kwenyika inopiwa.
Sezvo hutungamiri hwehupfumi hunoshandiswa hwekushandisa uye hunoratidza simba rezvemari.
Aya ndiwo mari yemakakiti (kubva pane imwe nguva nenguva) inoshandiswa sechinhu chekugadzirisa nevatengesi vemari kuti vaone kana kana kwete purogiramu, kana kurasikirwa kwave kuri kuitwa pazuva. Ikokudzokorora kwekuwanda inowanzoonekwa seyo yekuvhara chiyero chezuva rekutanga rebhizimisi.
Inopindirana neaibvunzwa, kana kupa mutengo wekushandura kwekunze kwenyika. Semuyenzaniso; pa EUR / GBP kana tikaona mutengo we 0.86334 - 0.86349, ruoko rworudyi rwuno 0.86349. Ruoko rworudyi rwuri parutivi urwo mutengi angatenga.
Zvinotsanangurwa sekutsvaga kuchinjeka chisina chokwadi, kuchinja kwekudzoka, kana mukana wekudzoka kudarika kunotarisirwa.
Kana uchitengesa forex, vatengesi vanofanira kuve nechokwadi chekuti havaisi pangozi mari zhinji kupfuura mari inoshandiswa pane yekutengesa. Dambudziko guru rinoreva chiyero mutengesi anonzwa akasununguka nekuisa mari paanenge achifungidzira pane imwe mari yemari.
Inofungidzirwa sekuongorora misika ye forex uye kujekesa kukanganisa kunogona kuitika nekutsvaga, nokudaro kushandisa nzira dzebhizimisi dzinogona kubatsira mukuderedza dambudziko rekutsvaga mari.
Risk premium ishoko rinoshandiswa pamari kana mari inoshandiswa inoshandiswa kubhadhara chikamu nokuda kwekutora dambudziko rakasiyana.
Apo nzvimbo inobatwa usiku humwe, uye kufarira kunoitika apo muteresi angabhadhara kana kuti awane panzvimbo yakasununguka, zvichienderana nehuwandu hwechikwereti hunobatanidza nayo. FXCC ichabvisa kana kutora chikwereti chekambani yekwereti zvichienderana nekutengesa kwezvikwereti zvekuda pakati penyika yepasi uye mari yekambani uye kutungamirirwa kwechinzvimbo chemutengi. Semuyenzaniso; kana muchengeti ari kwenguva yakareba mari yechikwata sehuwandu hweusiku hwekuda mari yepasi yakakwirira kudarika mari yemari, mutengi achawana chikwereti chiduku chezvipo zvakachengetwa usiku hwose. Kana mamiriro acho akasiyana aripo, iyo iyo muchengeti wekambani ichakanganiswa nokuda kwechiyamuro muhuwandu hwechikwata unotarisana. Kana muchengeti ari nguva refu yakareba mari yakakodzera, vanofanirwa kubatsirwa nekukwanisa kubhadhara uye kuwana mari yakakwirira kudzoka usiku humwe kupfuura zvavanenge vachifanira kubhadhara nokuda kwekupedzisa mari shoma inobhadhara mari.
Kunotsanangurwa sechiito chekuchengetedza nzvimbo dzakasununguka dzakasununguka, mune tarisiro yepfuma inofungidzira.
Nzvimbo Yakachengeteka Mari
Mune dzimwe nguva yemakakatengesi emakwikwi kana maitiro emagetsi, kushandiswa kunotarisirwa kuti kuchengeta kana kuwedzera kukosha kwayo, kunonzi 'Inzvimbo Yakachengeteka'.
Ichitsanangurwa sekutengeserana kunokura pazuva iro mutengesi unoitika.
Ichitsanangurwa segadziriro inoshandisa kuchinja kuduku mumutengo. Mutengesi anogona kubatsiro nekukurumidza kuzarura nekuvhara nhamba dzakawanda dzezvigaro kubva pakushambadzira.
Izvi zvinotsanangura mutengo wakaderera apo kutengeswa kwemari yepasi mune imwe mari mari inogona kuurayiwa. Icho chirevo chekutengesa mushamba pamutengo uri pamusoro pemutengo wezvino.
Kutengesa zvigadziri zvinomira zvigadziriswa pasi pezvino zvekutengesa mutengo wekutsvaga uye hazvibvumirwi kusvikira mutengo wekutengeswa kwemusika uripo, kana pasi pemutengo wemira. Kutengesa mirairo yekumisa, kamwe yakakonzerwa, inova mitemo yemusika kutengesa pamutengo wekozvino wemusika.
Iko kutengeswa kwemari iyo isiri yevatengesi.
Iri ndiro zuva iro chirongwa chinorayirwa chinofanira kugadziriswa nekuendeswa kwezviridzwa, kana mari uye mari pakati pevatengi nevatengesi.
Rinoreva kuva nechigaro chakasvinudzwa chakasikwa nekutengesa mari.
Izvo zvinoitika kana kune kukwirira kusinganzwisisiki mumusika uye kunotsanangurwa sechiyano pakati pemutengo wakatarwa uye mutengo waive wawanikwa mumusika uye wakashandiswa kuita basa racho. Slippage haifaniri kugara yakashata, uye nevatengi veFXCC vanogona kuwana maitiro akanaka, anozivikanwawo sekuvandudzwa kwemitengo.
Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Swift).
Kuwedzerwa kwemari uye mamwe mabasa ezvemari anoitwa kuburikidza neSwift, sezvo iri kukurukurirana ruzivo rwezvemari yekutsinhanisa ruzivo.
Izvi zvinoitika kana pane vatengesi vakawanda kune vatengi, izvo zvinotungamirira kumatengo akaderera nekuda kwekudarika kwekugovera pamusoro pekudiwa.
Apo muzvinayo ane ruzivo rwakakwana uye ruzivo rwemusika wemari yekuchinja kune dzimwe nyika, iye anotarisirwa kuongorora njodzi dzomukana wekutsvaga.
Inotumirwa kune ngozi apo hurumende haigoni kana isingadi kukwanisa kubhadhara chikwereti chemari.
Kutengesa, somuenzaniso, kushandiswa kwekunze kune imwe nyika inofungidzira; hapana chivimbiso chokuti avo vanoisa mari muFX vachawana kubva pane zvakaitika. Vatengi vanogona kurasikirwa negavo yavo yose yakaiswa margin, vachiita kutengesa FX zvakanyanya kufungidzira. Vaya vanotengesa kunze kwenyika vanofanira kungoisa pangozi mari iyo inofungidzirwa kuti inogona kuisa mari, inotsanangurwa semari iyo iyo yakarashika isingashanduki mararamiro emutengi, kana mararamiro emhuri yavo.
Chiitiko chiri mumusika weXexx chinotsanangurwa sekutenderera kwakanaka kana kusina kunaka mumabasa ekutengesa, ayo kazhinji anogara kwenguva pfupi.
Misika yemasango yakagadzirwa nenzira dzezvigadzirwa zvemari zvinotengeswa pakarepo uye mirairo inogadziriswa pakarepo, sezvo vatori vechikamu vari panzvimbo iyo yepamusoro yemisika vasingagamuchiri kana kuunza mari yepanyama iyo yavanotengesa.
Spot mutengo / chidimbu
Iko mutengo wechimbo chinogona kutengeswa kana kutengwa mumusika.
Iyo ndiyo nzira yakagadziriswa yekugadzirisa kushandiswa kwenyika kune imwe nyika iyo zuva rekukosha rinotarirwa mazuva eBusiness 2 mberi kubva kuTeti Date.
Kusiyana pakati pemitengo yakapiwa kurongeka nokukurumidza (kubvunza mutengo) uye kutengeswa kwepamusana (mutengo webhadha) yevheji mari.
Iri dambudziko rezvemari munyika umo mune kuwedzera kwepamusoro pamwe nechinetso chekushaiwa kwehupfumi, zvichikonzera kukurumidza kuwedzera kwehupfumi nekusimudzira mitengo.
Mamiriro apo pasina nzvimbo yakasununguka uye mutengi wekutenga uye kutengesa zvakaenzana.
Mugove wakatarwa mumashoko ekutengeserana ekutanga, ndiyo yakaenzana nezvikwata zve100,000 zvebhadha rekuda mune forex trading trading pair pair. Mugove wakaenzana ndeimwe yezvikamu zvitatu zvinowanzozivikanwa majenya, mamwe maviri ndeokuti: mini-lot uye micro-lot. Mugove wakawanda ndeye 100,000 zvigunwe zveparadhesi maviri, mini-majeri inomiririra 10,000, michina yakawanda inomiririra zvikamu zve1,000 zvemari ipi zvayo. Shanduro imwe-pip yejairo yakaenzana inoenderana ne $ 10 shanduko.
Sterilization inotsanangurwa sechirongwa chemari yemari, iyo inoshandiswa nebhandi guru rinokonzera migumisiro yezvipimo uye zvinyorwa zvemari pamari yemari yekushandisa mari. Kudyidzana kunosanganisira kutenga kana kutengeswa kwemari yemari nebhandi guru, kukanganisa migumisiro yekunze kwenyika inopindira. Izvo zvinokonzera kushandiswa kunobatsira kukosha kwemari yemari yakaenzana kune imwe, inotangwa mumusika wokutengesa kune dzimwe nyika.
British pound, zvichida kuzivikanwa sekambo kana kutengesa iyo currency pair GBP / USD.
The Stochastic (Stoch) inoedza kusimudzira mutengo sepakati pakati pe0 ne100. Ne migwagwa ye stochastic, mitsetse miviri yakarongwa, iyo inokurumidza uye inononoka stochastic mitsara. Icho chiratidzo chinonyanya kufanana chinoshandiswa nevatengesi kuti vasarudze simba rezviitiko.
Rega Kurasi Mutemo
Iyi ndiyo urongwa chaihwo hunoiswa nemutengi kuti avhare chinzvimbo kana mutengo wacho uchitanga kune zvakasiyana nechinzvimbo chechigaro nehuwandu hwemapips. Mune mamiriro ezvinhu akawanda rega kurashikirwa kurasikirwa kunourayirwa nokukurumidza apo misika inosvika, kana inopfuura nepakati pekwereti yega yega yepamusoro. Kana kangobudiswa, urongwa hwekumira huchaitwa huchimirira kusvikira mutengo wakamira unosvika. Rega mirairo inogona kushandiswa kuvhara chinzvimbo (kurega kurasikirwa), kuchinja chinzvimbo, kana kuzarura nzvimbo itsva. Kushandiswa kwakanyanya kwemirairo yekumira ndiko kuchengetedza nzvimbo iripo (nekudzivirira kukanganisa, kana kudzivirira kuwanikwa kusingabatsiri). Kana imwe nguva yemusika ichirova, kana inopinda mumutengo wekumira, urongwa hunoitwa (hunobviswa) uye FXCC ichaita urongwa pane inotevera inowanikwa mutengo. Rega mirairo haisi chivimbo chekuurayiwa pamutengo wemirairo. Mamiriro ezvinhu emakatani kusanganisira kusagadzikana uye kushayikwa kwevhesi zvingaita kuti urongwa hwekumira hurayiwe pamutengo wakasiyana pane urongwa.
Rega Mutengo Waive
Izvi zvinotsanangurwa semutengo apo muteresi akapinda mutengo unobatsira kumira kurasikirwa kwekurongeka.
Apo mukati mehupfumi pane marefu akagara eusina basa, rinotumidzwa seHurumende yeHurumende. Chikonzero chacho chingave chiri pamusana pemashandisirwo makuru muhupfumi hunokonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana, zvakadai semakambanikiti, makwikwi uye hurumende yehurumende.
Zvinoshandiswa mukugadzirwa kwekwenyanzvi kuratidza huwandu hwemari apo mutengo unotarisirwa kuti uve nezvinetso kuputsa uye huchazvigadzirisa pachako.
Mari yakashandurwa ndeyekukwereta panguva imwe chete uye kukweretesa yemari imwechete yebhadharo yakapiwa pavanoshandiswa mberi shanduko.
Tsunga / Kuvhara
Kana muteresi weFXCC ane P / L mune imwe mari kunze kweAmerica madhora, P / L inofanira kushandurwa pakuvhara kwezuva rimwe rebhizimisi kuDhora reU.S., pamutengo wekushandurwa uripo panguva iyoyo (inozivikanwa sekutendeuka kwehuwandu ). Izvi zvinonzi kunotsvaira. Kusvikira P / L ichitsvaira, kukosha kwekambani yevashandi ichachinja zvishoma (kumusoro kana pasi), sekushandura kwehuwandu hwebatsiro nekurasikirwa uye kushandiswa kwemari. Semuyenzaniso; kana muchengeti ane purogiramu mu yen, kana kukosha kwe yen kunokera mushure mokunge nzvimbo yacho yavharwa, asi mari isati yasvika inoshandiswa mumadhora, kukosha kwebhuku kuchachinja. Iko kuchinja kunongowanikwa purofisi / kurasikirwa kwemari, naizvozvo zvakashata hazvisi zvishoma.
Sangano reWorld-wide Interbank Telecommunications ibhizimisi reBelgian rinopa hurumende yepasi rese yekugadzirisa zvekunze kune dzimwe nyika. Ruzhinji runewo hutungamiri hwehutano hwemasimboti emari ekushandiswa kwechisimbiso uye zvinangwa (kureva USD = US Dollars, EUR = I Euro, JPY = Yenjapan Yen)
Iyi inguva yechirongwa chekutengeserana chinokonzera chigaro chakasununguka kubva kune imwe (kusvika kune mazuva mashoma) mukuedza kubatsirwe kubva kune kuchinja kwemitengo, iyo inowanzonzi 'kusvitsa'.
Market slang yeSwitzerland Franc, CHF.
Tora Kubhadhara Mutemo
Icho chirevo chakaiswa nekwereti nemutengo wakagara wataurwa apo kana matengo emusika asvika pachidiro chaunoda, urongwa huchavharwa. Pane imwe nguva urongwa hwacho hwazadziswa, hunoguma nehuwandu hwebasa rakapiwa.
Kuongorora kwekwenyanzvi kunoshandiswa mumatongerwo ematongerwo ematongerwo emitambo uye maitiro mukati mekuedza kutarisa mutengo wemutengo
Inotsanangurwa sekuti kuitika kwemutengo wemari kunodonha kana pasina chikonzero chikuru chekuderera. Muenzaniso unenge uri apo mutengo unodzokera pane kukurudzira kwakakura mushure mokunge uchingoputsa munguva pfupi.
Chiyero pakati penhamba dzekutengeserana kwenyika uye kutengeswa kwenyika.
Maikirwo emagetsi anoshandiswa seanoedza kufanotaura zvichaitika mumisika yemangwana. Icho chikamu chinokosha chekuongorora kwekwenyanzvi hunoshandiswa sechati chati uye yakagadzirirwa kuongorora kushandiswa kwemazuva mashomanana.
Inotsanangurwa semusika apo hapasi vatengesi vakawanda nevatengi, izvo zvinoguma zvave zvishoma zvekutengesa ivhu uye zvese zvinoshandiswa zvekutengeserana zvishoma.
Izvi zvinotsanangurwa sechinhu chiduku kuchinja mumutengo, kumusoro kana pasi.
Mangwana anotevera (Tom anotevera)
Mangwana inotevera inosanganisira nzvimbo dzakapfigwa pane rimwe zuva rebhizimisi pamusana wekuvhara uye nekudzoka zvakare zuva rakatevera. Kubudiswa kwemazuva maviri (2) mazuva mushure mezuva rekutengesa. Ndiko kutengesa kamwechete uye kutengesa kwemari kuitira kuti usabvisa chero kupi zvayo kubhadhara mari.
Nhoroondo yekutengesa kushanda, kazhinji inotsanangurwa sevhizha rezvibereko.
Iri ndiro zuva rekushanda kunoitwa.
Nzira yekutengeserana inowanikwa apo nyika inotengeswa kupinda kune dzimwe nyika. Icho chiyero chezvoupfumi chekusava nekutengeserana kusina kunaka uye chinoratidza kubuda kwemari yepamba kune dzimwe nyika.
Kutenga kana kutengesa chero ipi zvayo, maitirwo uye zviridzwa nemamwe mapato. Forex trading ingarondedzerwa sekufungidzira pamusoro pekuchinja kwehuwandu hwemari dzedzimwe nyika.
Kutengesa madhekski anozivikanwawo se 'kubata madheki'. Ndiyo apo kutengesa uye kutenga kutengesa kunoitika uye kunogona kuwanikwa mumabhangi, makambani ezvemari, nezvimwewo zvinogona kupa vatengesi nekukurumidza kushandiswa kwemirairo yavo.
A software application apo muteresi anogona kupa murairo kuti aite mutengesi pane mutengi. FXCC-MT4 (MetaTrader 4) muenzaniso wekutengeserana.
Simira yekufamba inoshandiswa kuchengetedza kuwanikwa kunobva kune imwe nzvimbo yebhizimisi nekuchengetedza bhizinesi rakazaruka uye kubvumira kupfuurira kwepfuma (kubhadhara) chero bedzi mutengo uri kufamba mumutungamiri unoda. Haisi kuiswa pane imwe chete asi imwechete yezana.
Ichi chiri kutenga, kana kutengesa, semuenzaniso, chikwereti chekunze kwekune imwe nyika chinokonzerwa nekugadziriswa kwemurairo.
Iyi ndiyo mari yekutenga, kana kutengesa zvigadzirwa zvemari.
Iri ndiro zuva iro bhizimusi rinoitika.
Apo makambani ari kutora mukutengeserana kwenyika dzakawanda, dambudziko ravanotarisana naro kutengeserana kwekutengeserana, kana zvikasadaro mari yekushandura mari ichachinja mushure mokunge sangano rapinda muzvipimo zvemari.
Nhungamiro yemusika kana mutengo, kazhinji unobatana nemashoko anoti: "Chikwata, chikwata, kana kumativi" (kutarisa) uye inogona kuva nguva pfupi, kwenguva yakareba kana pakarepo maitiro.
Ichi chimiro chekugadzirwa kwekwenyanzvi (chinoratidza), iyo inonziwo kushandiswa kwemashoko. Mitsara yemiganhu inogona kushanda sezvinyorwa zvinongororwa zvigadzirwa, kuwana maitiro kuburikidza nekugadzirisa muto wakakodzera kupfuura dzose: pasi-pasi, yakakwirira, kana yekuvhara nekuzarura mutengo.
Mutengesi wakafanana nenotsanangudzo yevhesi uye inomiririra mari yakawanda inokosha yekutengeserana kwose kwakaitwa munguva yakati.
Icho chirevo chinoratidza chikwata ichi uye chikumbira mutengo mumusika wokutengesa kune dzimwe nyika.
Iro shoko rokuti nzvimbo yakazaruka.
Apo shanduro yekutengesa yebhadha iri pasi pemasimba ayo ekutenga parity, inofungidzirwa isingakoshi.
Iro yezana yevashandi vasati vari kunze kwebasa.
Iro izwi rokuti nguva chaiyo kubatsirwa kana kurasikirwa kwakapiwa panguva yazvino yokushandura. Semuenzaniso, kana muchengeti asarudza kuenda kugoti yemamwe mari maviri, iye / iye achada kutengesa pamutengo wekutengesa uye iyo isina kufanirwa P / L inochengetedza kusvikira nzvimbo yakapiwa yavharwa. Kana yavharwa, P / L ichave yakawedzerwa kana yakabviswa kubva pachiyero chakasara pamubhadharo, kuitira kuti uwane mari itsva pamutengo wemari.
Uyu ndiwo mutsva wekutengesa kwemutengo uri pamutengo wakakwirira zvichienderana neshoko rakapfuura.
Nhamba inofarira inoshandiswa nemabhengi eUnited States kukweretesa kune vatengi vavo kana kuti vatengesi vemabhizimisi makuru.
Iyi ndiyo mutemo wepamutemo weUnited States of America, inomiririrwa seDHID kana ichiita shanduko dzekunze kune dzimwe nyika.
Nhamba yeodhora (USDX) inoyera kukosha kweDhora reAmerica maererano nekukosha kwebhakiti yemari yevashandi veUnited States vanokosha. Parizvino, ino nhamba inotaridzwa nekukweretesa muhuwandu hwekushandura kwematanhatu makuru enyika: euro, yen yenJapan, Canadian dollar, British pound, Swedish krona uye Swiss franc. Iuro inonyanya kukosha maererano nedhora iri mu index, iyo inonzi 58% yehuwandu hwekukosha, inoteverwa ne yen ne circa 14%. Nhamba yacho yakatanga mu1973 ine nheyo ye 100, maonero kubvira ipapo akaenzana nechinhu ichi.
Icho chimiro chakataurwa nezvavadzidzisi vezvesayenzi, apo inotaridzirwa sechiratidzo chekuchinja kunoshanduka.
Ndiyo zuva iro kushandiswa kwebhadharo pakati pevamwe vekutengeserana kwemari kunoitika. Zuva rekukura kwepasita mari yekutengesa ndeyemazuva maviri (2) mabhizimisi mazuva kubva apo nzvimbo yacho inovhurwa.
VIX inomirira chiratidzo cheBBCOE Volatility Index, chimiro chakakurumbira chekusava nehanya kweSXX index ongasarudza; VIX yakaverengwa neChicago Board Options Exchange (CBOE). Kana VIX kuverenga ichikwira ipapo varairidzi nevatengesi vanowanzofunga kuti njodzi yekutengeserana yakakwirira; kuti mararamiro makuru ehutano angave ari munguva yekuchinja. IVIX inotitaurira ine kukwana kwemazuva makumi matatu kutsika kwakakwana kwekufambisa kwegore mugore re SPX. Somuenzaniso, kuverenga kwe20% kwaizotarisira 20% kufamba, kumusoro kana pasi, mumwedzi gumi nembiri inotevera.
Zvichitsanangurwa seyero yekutengesa mutengo, iyo inogona kuyerwa nekushandura kwakasiyana kana kusiyana pakati pekudzoka kwechimbo chimwe chete.
Kuverenga kwehuwandu hwekuita kwekutengeserana kweimwechete: kuenzana, mari yekubatana, zvigadzirwa, kana kuti index. Dzimwe nguva inofungidzirwa sehuwandu hwezvibvumirano zvinotengeswa mukati mezuva.
Ichitsanangurwa se "virtual private server". Kuzvitsaurira kune imwe nzvimbo yakasara, iyo inobvumira vatengesi kuti vatakure uye vashandise maEE avo kure, vachiita kuti vatengese 24 / 5 pakuderera kwakaderera, vasingadi kuva nemakombiyuta avo ega achishandura. Basa iri kuburikidza neFXCC rinopiwa neBeeksFX.
Wedzera Chart Pattern
Iyi muenzaniso inoratidza kusiyanisa kwemaitiro, ikozvino yakaumbwa mukati memhara. Wedges yakafanana nekatatu, mafungiro, ane rutsigiro uye kudzivirira mafambiro. Iyi pattern yechati ndeyekugara kwenguva refu iyo inoratidza kutengesa mutengo.
Zvichitsanangurwa sechiitiko chemusika wakanyanyisa, umo mutengo wakakosha wekutengesa unokurumidza kuteverwa nekuchinja kwakasimba.
Inomiririra zviitiko apo mari inokweretwa yakawanda kubva kune dzimwe nzvimbo dzemari nemabhangi, pane zviduku zvishoma zvakananga kubva kuvashambadzi viduku.
Ndiyo mutengo wemumiririki wezvigadzirwa zvezvitoro uye chiyero chekuchinja mumutengo mukugadzira nekupararira kwehupfumi. Kazhinji inotungamirira mutengo wemari yevatengi ne 60 kune mazuva 90. Zvokudya nemitengo yemabhizimisi inowanzorongwa zvakasiyana.
Zuva iro mabhandi ari mune mari yemari yezvemari yakazarurirwa bhizinesi, somuenzaniso, holide yebhangi muU.S., yakadai seChirongwa cheKuonga, zvinoreva kuti HASI zuva raishanda kune chero maDD based based quoted.
Iyo inyika yezvemari yezvemari yakagadzirwa nenhengo dzeMMF dzinobatsira mukusimudzirwa kwenyika dzechikamu kuburikidza nekuita zvikwereti uko mari yega yega isingawanikwi.
Anozivikanwa semupi webasa rekutengeserana kana mutengesi wemari yepamusoro.
A rarely slang used used for a billion.
Zvinotsanangurwa sekudzoka kwekutsvaga mari.
Ndiyo mutsetse unoita kuti zvikwereti zvinowanikwa mune imwe nguva panguva apo zvishandiso zvine imwechete yemari yechikwereti asi nguva shoma kana yakakura. Inoshandiswa kupa pfungwa yehupfumi hunotarisirwa mune ramangwana, uyewo nehuwandu hwehuwandu hunochinja.
Gore-re-gore. Kushandiswa kunoshandiswa pakuverenga kuwandisa kwemazana ematambudziko kune gore negore.
Vhura FREE ECN Account Nhasi!
NYIKA Afuganisitani Arubhaniya Arujeriya American Samoa the national Angola Angwira Andiguya neBhabhudha Argentina Arumeniya Arubha Ositireriya Ositiriya Azabhaijani Bhahamasi Bhahareni Bhangiradheshi Barbados Bherarusi Belize Benin Bhemudha Bhutani Bolivia, Plurinational State of Bhoziniya neHezegovhina zimbabwe Bhuraziri British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bharugeriya Burkina Faso Burundi Kambodhiya Kameruni Kanadha Kepu Vhedhi Cayman Islands Yepakati Ripabhuriki Afrika Chadhi Chile China Cocos (Keeling) Islands Korombiya Komorosi Kongo Congo, Democratic Republic of Zvitsuwa Kuku Kosita Rika Cote d'Ivoire Zimbabwe d'Ivoire Kiroshiya Kiyuba Saipurasi Czech Republic Dhenimaki Jibhuti Dhominika Ripabhuriki Dhominika Ekwadho Egypt E Savhadho Ikwetoriya Gini Eritrea Esitoniya Ithiyopiya Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finirendi Furanzi French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambiya Georgia Jerimani Ghana Gibhurata Girisi Girinirendi Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Holy See (Vatican City State) Honduras Hong Kong Hangari Aisirendi India Indonezhiya Iran, Islamic Republic of Iraki Ayarendi Vechiwi Man Izirayeri Itari Jamaika Japani Jersey Jodhani Khazakisitani Kenya Kiribati Korea, Democratic Peoples Republic of Korea, Republic of Kuweti Kijisitani Lao vanhu Democratic Republic Rativhiya Rebhanoni Lesotho Raibheriya Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Rituaniya Rukuzemubhogu Macao Makedhoniya, iyo yekare Yugoslavia Republic of Madhagasika Malawi Marazhiya Marudhivhu Mali Malta Zvitsuwa Masharo Martinique Mauritaniya Morishiyasi Mayotte Mekisiko Micronesia, of States of Moldova, Republic of Monako Mongoriya Mondenegiro Motserati Moroko Mozambiki Myanmar Namibhiya Nauru Neparo Netharenzi Netherlands Antilles New Caledonia Nyuzirendi Nikaraguwa Naija Naijeriya Nyu Tsitsuwa Nofoku Maodzanyemba Zvitsuwa Mariyana Noweyi Omani Pakisitani Palau Palestinian Territory, Zvaainge Panama Papa Nyu Gini Paraguay Peru Firipaini rhodesia Porendi Putugaro Pota Riko Kwata Reunion R union Romaniya Russian Federation Rwanda Saint Barthlemlemy Saint Helena, Ascension uye Tristan Da Cunha Sendi Kitsi ne Nevhisi Sendi Rusiya Saint Martin (French chikamu) Saint Pierre uye Miquelon Sendi Vincent neGirenadhini Samoa San Marino Sayo Tomu nePurinzipu Saudhi Arabhiya Senegal Serbia Secheres Sierra Leone Singapowo Sirovhakiya Sirovhinyiya Zvitsuwa Soromoni Somaria Chamhembe Afrika South Georgia uye South Sandwich Islands Speini Shiri Ranga Sudhani Suriname Svalbard uye Jan Mayen Sikwazirendi Siwidheni Siwizarendi Syrian Arab Republic Taiwan, Province of China Tajikisitani Tanzania, Zimbabwe Tairendi Timor-Leste Togo Tokerau Tonga Trinidhadhi neTobhago Tunisiya Teki Tekimenisitani VokuTurkey zveTurks Islands Tuvalu Uganda Ukireni Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi United Kingdom Uruguay Uzebhekisitani Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of Vhetinamu Virgin Islands, British Virgin Islands, US Wallis uye Futuna Western Sahara Yemeni Zambia zimbabwe
Kutengeserana kwekutengesa kune ngozi.
Iwe unogona kurasikirwa nemari yako yose inotengeswa.